नेपाली अभिनेत्री निरिषा बस्नेत भारतीय सिरियलमा देखिदै(भिडियो सहित)
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र ‘जानी नजानी’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी निरिषा बस्नेतले तीन वर्षपछि भारतीय सिरियलमा कमब्याक गरेकी छन् । उनको केमियो भूमिका रहेको सिरियल ‘तेनाली रामा’ को बिहीवार प्रोमो सार्वजनिक भएको छ । जसमा निरिषाको चरित्रचित्रण गरिएको छ । प्रोमोमा भिन्न गेटअपमा देखिएकी उनी यो सिरियलमा चिनियाँ युवतीको भूमिकामा प्रस्तुत छिन् ।
भाद्र १४ मा नेपाली चलचित्र “गोबर गणेश “को सुभ साइत गरियो
२०७७ भदौ १४ काठमाडौ । कल्याण अधिकारीको निर्देशनमा बिलभ्ड इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको कमेडी एक्सन बेसमा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र “गोबर गणेश “को २०७७ भाद्र १४ गते काठमाडौ स्थित भद्रकाली मन्दिरमा शुभ साइत गरिएको छ भने चलचित्रको छायांकन यसै महिना को तेस्रो हप्ता बाट गरिने कुरा निर्देशक कल्याण अधिकारीले बताएका छन।
एक गीत र केही सिन बाँकी राख्दै ४४ दिनमा सकियो ‘झिँगे दाउ’को छायाँकन
झिँगे दाउ’को नेपाल मै पहिलो पटक मित्र डि गुरुङको सम्पादन टेबुलमा एट के प्रविधिमा भैरहेको बताए । उनले अगाडी – ‘भने मैले जानकारी पाए अनुसार आजसम्म कुनै पनि नेपाली सिनेमाको एट के प्रविधिमा सम्पादन गरिएको छैन् ।
चलचित्र ‘प्रेम संसार’को ट्रेलर सार्वजनिक
प्रेमबहादुर सुनारको प्रस्तुतिमा तयार भएको चलचित्र ‘प्रेम संसार’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सोनी फिल्मस्को प्रस्तुति रहेको चलचित्रलाई राम गौतमले निर्देशन गरेका हुन् ।
विराज भट्टकाे निर्देशनमा रहेकाे फिल्म ‘साङ्लो’काे पोस्टरसँगै प्रदर्शन मिति सार्वजनिक
अभिनेता विराज भट्टले पहिलो पटक निर्देशन गरेको फिल्म ‘साङ्लो’ पोस्टरसँगै प्रदर्शन मिति सार्वजनिक भएको छ । फिल्म माघ २४ गतेबाट देशैभर प्रदर्शन हुने तय भएको छ ।
कार्य विनायक मन्दिरमा पुजा गर्दै ‘चपली हाइट ३’ को शुभ–मुहुर्त गरियो
फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को शुभ मुहूर्त गरिएको छ । कार्य विनायक मन्दिरमा पुजा गर्दै फिल्मको मुहूर्त गरिएको हो ।
विपिन कार्कीको फिल्म ‘सेल्फी किङ’को पोस्टर र प्रदर्शन मिति सार्वजनिक
अभिनेता विपिन कार्कीको फिल्म ‘सेल्फी किङ’को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । यो फिल्म माघ २४ गते देखि प्रदर्शन हुने भएको छ । यो फिल्म विपिनलाई सेल्फी किङको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘मखमली मखमली’को ट्रेलर सार्वजनिक, मंसिर १३ बाट प्रदर्शनमा आउने
नारी कथामा आधारित चलचित्र ‘मखमली मखमली’ मंसिर १३ बाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरेको निर्माण पक्षले मंसिर १३ बाट देशभर फिल्म प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
अभिनेता विपिन कार्की लाई पुत्री लाभ
अभिनेता विपिन कार्की पिता बनेका छन् । उनलाई पुत्री लाभ भएको छ । उनकी श्रीमती रेश्मा कटुवालको पहिलो सन्तानको रूपमा सोमबार बल्खु स्थित बयोद्या अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् ।
पूर्वराजा र हिमानीलाई भेटिन् पूजा शर्माले
अभिनेत्री पूजा शर्माले पूर्वराजपरिवारका सदस्यसँग भेट गरेकी छिन् । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मी शाहसँग खिचेका तस्वीर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेकी हुन् ।
चलचित्र ‘चुरीफुरी’ को लागी कलाकार छनोट गर्दै ऋषिराज
ऋषिराज आचार्यको निर्देशनमा बन्ने चलचित्र ‘चुरीफुरी’ को लागी कलाकार छनोट कार्य सुरु भएको छ । शुक्रवार गरिएको पहिलो चरणको कलाकार छनौट अडिसनबाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
‘ए मेरो हजुर ४’मा अनमोल र सुहानाको जोडी फाइनल
ब्लकबस्टर चलचित्र ‘ए मेरा हजुर ३’को चौथो सिरिज पनि बन्ने भएको छ । सुनिलकुमार थापाको निर्माणमा झरना थापाले चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’को निर्देशन गर्नेछिन् ।
रेखा थापा राप्रपाको जागरण यात्रामा सहभागी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने भन्दै बिहीबारदेखि जनकपुरबाट धार्मिक जागरण यात्रा सुरु गरेको छ । जागरण यात्रामा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरासँगै नायिका रेखा थापा पनि सहभागी भएकी छिन् । मङ्सिर ४ गतेसम्म चल्ने उक्त जागरण अभियानमा रेखा र केन्द्रीय अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर जबरा, डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी, पार्टीकी सह महामन्त्री एवं प्रवास प्रमुख […]
भुवनेश्वरी मन्दिरमा शुभ मुर्हुत गर्दै सुरु भयाे चलचित्र ‘हिजो आजका कुरा’को छायाँकन
चलचित्र ‘हिजो आजका कुरा’को छायाँकन सुरु भएको छ । पशुपतिस्थित भुवनेश्वरी मन्दिरमा शुभ मुर्हुत गर्दै बुधबारदेखि चलचित्रको छायाँकन सुरु गरिएको हो।
शिल्पा पोखरेल साधारण तारेखमा रिहा
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल साधारण तारेखमा रिहा भएकी छन् उनलाई विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
आँचल र उदिपकाे बिहे फागुनमा
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने अभिनेत्री आँचल शर्मा प्रेम सम्बन्धको कारण निकै चर्चामा आउने गरेकी छन् ।
फिल्म ‘१२ सत्ताइस’काे ट्रेलर सार्वजनिक
पैसा कमाउन १२ सत्ताइस गर्नुपर्छ’ भन्ने बिषयमाबस्तुमा निर्माण भएको फिल्म ‘१२ सत्ताइस’ ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ ।
चलचित्र ‘मिस्टर नेपाली’को नयाँ गीत ‘डंका पिट्यो’ सार्वजनिक
शुक्रबारदेखि नेपालभर रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘मिस्टर नेपाली’को नयाँ गीत ‘डंका पिट्यो’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
हाँस्य कलाकार मह जोडीको फिल्म ‘शत्रु गते’ युट्युबमा रिलिज
निर्देशक प्रदिप भट्टराई र हाँस्य कलाकार जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको फिल्म ‘शत्रु गते’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । फिल्ममा हरिवंश आचार्यको कथा लेखन रहेको छ।
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफूलाई पक्राउ नगर्न दायर गरेको रिट खारेज
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफूलाई पक्राउ नगर्न दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको छ ।
फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ आइतबार अमेरिकामा प्रिमियर
आगामी शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ नेपाल भन्दा पहिले अमेरिकामा प्रिमियर गरिएको छ ।
‘प्रेम गीत ३’ को छायांकन सुरु
फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ को छायांकन सुरु को छायांकन सुरु भएको छ । काठमान्डौको दक्षिणकाली मन्दिरमा पूजा गर्दै फिल्मको शुभ मुहुर्त गरिएको हो ।
फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को छायांकनअघि नै मोसन टिजर सार्वजनिक
चर्चामा रहेको फिल्म ‘प्रेमगीत ३’ को मोसन टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । टिजरमा अभिनेता प्रदीप खड्कालाई भिन्न अवतारमा देखाईएको छ । यो फिल्मको छायांकन भने शुरु भएको छैन् ।
वीरगञ्जमा सुरु भयाे चलचित्र महोत्सव
नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले चलचित्र उद्योग स्थापनाको ५३ औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आजबाट वीरगञ्जमा चलचित्र महोत्सव सुरु गरेको छ ।
दयाहाङले छोडेपछि ‘लप्पन छप्पन २’मा भित्रिए यी दुई नयाँ कलाकारकाे
फिल्म ‘लप्पन छप्पन २’को छायाँकन अहिले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा भइरहेको छ । छायाँकनरत समयमै अभिनेता दयाहाङ राइले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै केही दिन अगाडि फिल्म छोडेका थिए ।
अनमोले छाडे ‘धुपौरे’
अनमोल केसीले साम्तेन भुटियाको फिल्म ‘धुपौरे’ छाडेको चर्चा चलिरहेको छ । उनले फिल्म छाडेपछि फिल्म नै नबन्ने खबर समेत बाहिरिएको छ ।
‘चलचित्र नचले पोस्टर च्यातेर फालियोस् तर समयमै रिलिज हुन पर्छ’: निश्चल बस्नेत
कात्तिक ८ गते प्रदर्शन हुने भनिएको चलचित्र ‘घामड शेरे’ अब कात्तिक २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
ऋचा शर्माले दिइन ब्याचलर पार्टी
अभिनेत्री ऋचा शर्माले ब्याचलर पार्टी दिएकी छन् । उनले केही आफ्ना नजिकका साथी जमघट गराएर ब्याचलर पार्टी दिएकी हुन् ।
‘मिस्टर नेपाली’ नेपालमा प्रदर्शन अगावै अमेरिकामा प्रिमियर गरिने
प्रेमराज दाहालको निर्माण तथा देव भुषालको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘मिस्टर नेपाली’ कात्तिकको २९ गतेबाट नेपालमा रिलिज हुँदैछ ।
अभिनेता सुशील श्रेष्ठ र आमिर गौतम अभिनित फिल्म ‘बादशाह जुट’ आजबाट रिलिज भएको छ । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत यो फिल्म देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आएको हो ।
अनमोल केसीले आफ्नो साथमा भएको कुकुरको पुजा गरी कुकुर तिहार मनाए
नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको तेस्रो दिन आज घर घरमा सुरक्षा गर्ने कुकुरलाई मीठामीठा खानेकुरा खान दिएर सम्मान गरिन्छ ।
फिल्म ‘१२ सत्ताईस’ को फष्टलुक पोस्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘१२ सत्ताईस’ को फष्टलुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा प्रमुख कलाकारहरु समिर श्रेष्ठ, अभिषेक नेपाल,काजि राना, अस्मिता लामिछाने, सम्रान्त थापा,अभोन राज उप्रेती,भिष्म जोशी रहेका छन् ।
फिल्म ‘माछा माछा’ को ट्रेलर सार्वजनिक
फिल्म ‘माछा माछा’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार फिल्मको ट्रेलर युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
फिल्म ‘प्रेम संसार’ को अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक
मंसिर १३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने प्रेमकथानक फिल्म ‘प्रेम संसार’को अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक भएको छ ।
शो थोरै पाएपछि सर्‍यो ‘घामड शेरे’, ‘पोइ र्पयो काले’लाइ भने फाइदा
रियल कपल निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको अभिनय रहेको फिल्म ‘घामड शेरे’को प्रदर्शन मिति सारिएको छ । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको यो फिल्म अन्तिम समयमा आएर सारिएको हो ।
‘मिस्टर नेपाली’को ट्रेलर सार्वजनिक: भूवन केसीकाे दोहोरो भूमिका
कार्तिक २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
चर्चित टेलिशृंखला ‘हिजोआजका कुरा’को नामबाट फिल्म बन्ने
एक समयको चर्चित टेलिशृंखला ‘हिजोआजका कुरा’को नामबाट अब फिल्म बन्ने भएको छ। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित निकै रुचाइएको शृंखला सन्तोष पन्तले निर्देशन गर्थे भने अब बन्न लागेको फिल्मको निर्देशन भने उनकै छोरा साकार पन्तले गर्ने भएका छन्।
‘जीवन काँडा कि फूल’ चैत २२ देखि देशैभर रिलिज हुने
मदन पुरस्कार विजेता झमक घिमिरेको आत्मकथामा आधारित ‘जीवन काँडा कि फूल’ फिल्म चैत २२ देखि देशभर रिलिज हुने भएको छ।
चलचित्र ’लभ यु हमेशा’ को ट्रेलर सार्वजपनक
नेपाली कथानक चलचित्र लभ यु हमेशा’ को ट्रेलर सार्वजपनक गरिएको छ । त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित चलचित्रको ट्रेलरमा प्रेम, रोमान्स र एक्सन देखाइएको छ ।
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की र जिपी तिमल्सिनाको डिभोर्स हुदै
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्की र जिपी तिमल्सिनाको वैवाहिक सम्बन्ध संकटमा परेको छ ।
चलचित्र ‘बुलबुल’ ले इनास अवार्डमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि हात पारेको छ । विदेशमा रहेका कलाकारहरुको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) मा उक्त अवार्ड जितेको हो । सोमबार राजधानीमा भएको अवार्ड वितरण समारोहमा चलचित्र ‘बुलबुल’ ले उत्कृष्ट चलचित्रसहित ३ वटा विधामा उपाधि जित्यो भने चलचित्र ‘गोपी’ले बेस्ट जुरी अवार्ड जित्यो । ‘बुलबुल’ बाट निर्देशक विनोद […]
फिल्म ‘मखमली मखमली’काे फस्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘मखमली मखमली’ फस्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । फिल्म मङसिर १३ गतेबाट रिलिज हुने भएको छ । फिल्म सावित्रा चिलुवालले निर्माण गरेकी हुन् ।
मुस्कान खातुनलाई भेटन अस्पताल पुगे महानायक हमाल
एसिड आक्रमणपछि उपचार गराइरहेको वीरगञ्जकी मुस्कान खातुनलाई भेटेन महानायक राजेश हमाल सोमबार कीर्तिपुर अस्पताल पुगेका छन् ।
चलचित्र ‘घामड शेरे’ को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘घामड शेरे’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक कमेडी ड्रामा यो फिल्मको ट्रेलरमा एक युवकको कथा देख्न सकिन्छ ।
छ माया छपकैले दुई दिनमै ३ करोड कमायाे
शुक्रबार रिलिज भएको फिल्म छ माया छपकै ले दुई दिनमै तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी कमाएर रेकर्ड बनाएको छ।
सिनेमा ‘घामड शेरे’को पहिलो गीत रिलिज
कार्तिक ८ गते रिलिज हुने निश्चल बस्नेत तथा स्वस्तिमा खड्का स्टारर घामड शेरेको पहिलो गीत रिलिज भएको छ।
चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’को कमेडी, सस्पेन्स र भावनाले भरिएको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । कात्तिक ८ गतेबाट यो चलचित्र रिलिज हुँदैछ । चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’मा शिशिर राणाको कथा तथा निर्देशन छ ।
‘सरौतो’को दोस्रो गीत ‘केही आधा’ रिलिज (भिडियो)
फिल्म ‘सरौतो’ को ‘केही आधा’ बोलको दोस्रो गीत रिलिज भएको छ । गीतमा पुष्पन प्रधानको शब्द, संगीत तथा स्वर छ ।
‘मिस्टर नेपाली’ को दशैं गीत ‘हे मेरा परदेशी दाजुभाई’ सार्वजनिक
सदावहार अभिनेता भुवन केसीको दोहोरो भूमिका रहेको फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’ कात्तिक २९ बाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
रेजिना फिल्मले ९ नायिकालाई सम्मान गर्ने
रेजिना फिल्मस् प्रा.ली र शहिद फिल्मस् प्रा.लीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका ९ नायिकालाई एउटै मञ्चमा सम्मान गर्ने भएको छ ।
अभिनेत्री विनिता बरालले आफू गर्भवती रहेको भन्दै आफ्ना शुभचिन्तकलाई दशैंको छेकोमा सरप्राइज दिएकी छन् ।
नयाँ चलचित्र ‘धुपौरे’काे नायकमा अनमोल केसी फाइनल
चलचित्र ‘एन्टी हिरो’को तयारीमा रहेका नायक अनमोल केसीले अर्को एक नयाँ चलचित्र साइन गरेका छन् ।
चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरियो ।
‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ले दुई दिनमै ३ करोड कमायाे
लामो समयपछि नेपाली चलचित्रले बक्स अफिसमा बम्पर व्यापार गरेको छ । चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ चलेपछि सुस्ताएको चलचित्र बजारलाई अर्को एक हिट सिरिजले फेरि चलायमान बनाइदिएको छ ।
बाडीन करिश्मा ले खुसिको लड्डू
नायिका करिश्मा मानन्धरले ‘एसईई परीक्षा’ मा ‘बी प्लस’ ग्रेड ल्याएकी छिन । नायिका करिश्माले जीपीए ३ प्राप्त गरेकी हुन ।मानन्धरले एसईई परीक्षाको रिजल्टबाट आफू निकै खुशी भएको बताउदै उनले अब व्यवस्थापन विषय लिएर प्लस टु पढ्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन।
अबको चलचित्रहरुमा पालो सौगात मल्लको..
बिहिबार मात्रै शिशिर राणाको निर्देशनमा निर्माण हुने चलचित्र-पोइ पर्यो काले,साइन गरेका अभिनेता सौगात मल्ल केही समय हराएपनी अब फेरि चलचित्रमा काम गर्ने मुड्मा देखिएका छन।
वेब सिरिज -डिएर लभ को ट्रेलर रिलिज,ठुला चलचित्र सरह बनाइएको टिमद्वारा दाबी।
युवा बर्ग लाई लक्षित गरेर बनाइएको लभभस्टोरि कथामा आधारित यो वेब सिरिजमा युवाबर्गमा हुने गरेको मिलन,बिछोड,रोमान्स लगायत मिठो संगीत पनि देख्न पाइनेछ।
नायिका सुहानाले पहिलो चलचित्रमा देखाएको अभिनयको सबैले तारिफ गरेका थिय। एक फ्यान र एक स्टार बिचको कथालाई आधारित बनाएर निर्माण
नयाँ चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ बनाउदै दिपक र दिपा
दीपक र दीपालाई ‘छ’ नामबाट जुराइएको फिल्म निकै फापेको कारण यो फिल्मको नाम पनि ‘छ’ अक्षरबाटनै जुराइएको बुझिएको छ ।
आर्यन सिग्देल बन्दैछन सपनाको बच्चाको बाबु
चलचित्र(हजार जुनि सम्मको) छायांकन सकेर आर्यनले आफ्नो पत्नी सपनालाइ पूरा समय दिने बताएका छन।
चलचित्र जोकरको गीतमा सिम्पलको जिरो फिगरको चर्चा किन गरियो?जान्नका लागि हेर्नुहोस यो भिडियो…
आगामी फागुन ३मा हुन लागिरहेको चलचित्र ”जादुगर २ जोकर”को तिम्रो जिरो फिगर बोलको गित सार्बजनिक भएको छ..
प्रतिक्षित चलचित्र “हिमालकी रानी”को च्यारिटी शो सम्पन्न भएको छ । बालाजु स्थित अष्टनारायण हलमा भएको उक्त च्यारिटी शोमा दर्शकहरुको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिती रहेको थियो । संयुक्त एकता आवाज केन्द्रको सहयोगार्थ प्रदर्शन गरिएको उक्त च्यारिटी शो पश्चात देशका प्रमुख शहर तथा विदेशमा प्रदर्शन हुने छ । राजनितिक दलका नेता,चलचित्रका कलाकारहरु, विशिष्ट व्यक्तित्व एवं दर्शकहरुको बाक्लो उपस्थिती […]
म्युजिक भिडियो निर्देशक बिभोर पोख्रेलको निर्देशन रहेको भिडियोमा कोरियोग्राफी र लिड मेल मोडलमा अनुराग ठकुरी रहेका छन्। अनुराग संगै भिडियोमा फिमेल मोडलमा स्वीकृति प्याकुरेल , समिता ओझा र डिचेन लामा लाई फिचर गरिएको छ। कोरियोग्राफीमा नयाँ कन्सेप क्यामेरा सँगको केमेष्ट्री मिलाउन निकै गारो भएको थियो भिडियो को टेष्ट फरक पार्नु नै मेरो लक्ष थियो कोरिग्राफ़र […]
चलचित्र ‘प्रसाद’ को ट्रेलर सार्वजनिक
आउँदो मंसिर २१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘प्रसाद’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । निसन्तानको कथामा निर्माण भएको यो चलचित्रको ट्रेलरमा पनि सन्तान नहँदाको पिडा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । चलचित्रमा नायक बिपिन कार्की र नायिका नम्रता श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमतीको भूमिकामा देखिएका छन् । चलचित्रमा अभिनेता निश्चल बस्नेतको पनि मुख्य भूमिका छ । दिनेश राउत निर्देशित यो चलचित्रमा […]
फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ युट्युबमा रिलिज
गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको सुपरहिट फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । बुढासुब्बा डिजिटलबाट सार्वजनिक गरिएको फिल्म २ घण्टा ४८ मिनेट ४५ सेकेन्ड लामो छ । झरना थापाको डेब्यु निर्देशनमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी राणा, सलिनमान बनियाँ, सलोन बस्नेत, अम्बर सुवेदी, सुमन पौडेल, अजश्र ढुंगाना, अनुभव रेग्मी, बुद्दि तामाङ, अनुराग कुँवर, विल्सन बिक्रम राई, […]
‘वीर विक्रमभन्दा वीर विक्रम २ फरक’
काठमाडौं । दुई वर्ष अघि उत्कृष्ट व्यापार गरेको फिल्म ‘वीर विक्रम’को दोश्रो श्रृंखला ‘वीरविक्रम २’ निर्माण हुने भएको छ । फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले नयाँ फिल्म अघिल्लो संस्करण भन्दा फरक हुने बताए । ‘यो फिल्म वीरविक्रम भन्दा फरक हुनेछ । किनकी यस्तो कथा बस्तु आफैमा फरक छ ।’ राजधानीमा बिहीबार पत्रकारमाझ चाम्सले भने […]
‘हिमालकी रानी’ बनेर आउदै नायिका शान्ता तामाङ्ग
लामो समयदेखि प्रतिक्षित चलचित्र “हिमालकी रानी”को च्यारिटी शो गरिने भएको छ । आउदो कार्तिक २७ गते बालाजु स्थित अष्टनारायण हलमा ११ बजे चलचित्रको च्यारिटी शो गरिने चलचित्रकी हिमालकी रानी अर्थात नायिका शान्ता तामाङ्गले जानकारी दिइन । संयुक्त एकता आवाज केन्द्रको सहयोगार्थ प्रदर्शन गरिन लागेको उक्त च्यारिटी शो पश्चात देशका प्रमुख शहर तथा विदेशमा प्रदर्शन हुने […]
सञ्चिता र सन्नीको प्रेममा चम्कियो तारा (भिडियो)
चलचित्र ‘गुनगुन’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘चम्क्यो तारा चमक्क’ बोलको गीतमा प्रदीप भट्टराई शब्द, विकास चौधरीको संगीत र मेलिना राई तथा दौलत राइको स्वर रहेको छ । गीतको भिडियोमा चलचित्रकि नायिका संचिता लुइटल र नायक सन्नी ढकाल फिचर्ड छन् । गीतको भिडियो रामजी लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् भने सौरभ लामाले छायाँकन गरेका हुन् […]
‘चंगा चेट’का चार अपराधीहरु
आउँदो शुक्रबार (कात्तिक १६) गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘चंगा चेट’ को टिमले प्रमोशन अगाडी बढाइरहेको छ । ‘गोजीमा दाम छैन’ बोलको गीत सार्वजनि भएसँगै चलचित्रको प्रमोशन ह्वात्तै बढेको छ । यस गीत अहिले टिकटक लगाएतका एप्सहरुमा अत्यधिक प्रयोग पनि भएको पाइन्छ । यसैबिच चलचित्रको फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रका मुख्य चार कलाकार फस्टलुकमा […]
दीपिकाको इन्गेजमेन्ट एश्वर्य निर्देशक दीवाकरसँग
चलचित्र ‘एश्वर्य’बाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी नायिका दीपिका प्रसाईं र यसैचलचित्रका निर्देशक दीवाकर भट्टराईले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । दशैंको टिकाको केहिदिन पछि इन्गेजमेन्ट गरेको यो जोडीले अहिले बल्ल सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोष्ट गर्दै जानकारी दिएका हुन् । उनीहरुको बिहे भने आउँदो मंसिरमा हुने बताइएको छ । दीवाकर र दीपिका ‘एश्वर्य’को सेटबाटै नजिक भएका थिए । दीपिकालाई […]
पुजाको आक्रोश : पब्लिकमै झापड हान्ने धम्की
भिनेत्री पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापाले नयाँ फिल्म निर्माणको थालनी गरेका छन् । सुदर्शनकै निर्देशन रहने फिल्मको नाम ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ जुराइएको छ । लभस्टोरी फिल्म बनाउन माहिर सुदर्शनले पछिल्लो रिलिज ‘रामकहानी’मा कमेडी फ्लेवर मिसाएका थिए । फिल्मको औसत सफलता पश्चात सुदर्शन पुन: लभस्टोरी ल्याउँदै छन् । त्रिकोणात्मक प्रेमकथा रहने फिल्ममा पूजा शर्माको मुख्य […]
प्रियंका–आयुष्मानको पहिलो दशैं यस्तो रह्यो
नायिका प्रियंका कार्कीले प्रेमी आयुष्मान जोशीसँग पहिलो दशैं मनाइन् । इन्गेजमेन्टपछिको प्रियंकाको पहिलो दशैं विशेष रह्यो ।ज्ञानेश्वर घरमा साइतको टिका लगाएका प्रियंका र आयुष्मानले टिकाकै दिन सासु रविना र आफ्नी आमाको हातबाट टिका लगाए । दशैंको टिकाको दिनका सबै फोटोहरु प्रियंकाले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेकी छन् ।फोटोहरु हेर्दा प्रियंका र आयुष्मानलाई दशैंको टिका […]
भोलिदेखि एक सय पच्चिस हलबाट रिलिज हुँदै ‘जय भोल
३० असोज बडा दशैंको अबसर पारेर फुलपातीबाट चलचित्र ‘जय भोले’ देशव्यापी सिनेमा हलमा रिलिज हुने भएको छ । आफ्नो चलचित्र मुलुकका १२५ ओटा सिनेमा हलबाट रिलिज हुन लागेको यसका निर्माता एवम् निर्देशक अशोक शर्माले बताएका छन् । चलचित्र प्रदर्शनबारे उनले भने,‘केही हलमा हाम्रो शो बाँढिने भएको छ । तर धेरैजसो चलचित्र घरमा जय भोले एकल […]
‘ए मेरो हजुर ३ ’ मा अनमोलसँग प्रेमिल मुडमा सुहाना
काठमाडौं । केही समय अघि पोखरामा मुहुर्त गरिएको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ले शुक्रबारबाट औपचारिक छायांकन शुरु भएको छ । सुनिलकुमार थापाले निर्माण गर्न लागेको फिल्मको फष्टलुक सार्वजनिक भएसँगै सुटिङ पनि शुरु भएको हो ।झरना थापाले निर्देशन गर्ने फिल्मको फष्टलुकमा अनमोल केसी र झरनापुत्री सुहाना थापालाई देख्न सकिन्छ । दुई फष्टलुकमध्ये एक फष्टलुकमा अनमोल र […]
प्रदीप र जसिता स्टारर फिल्म लभ स्टेशनको सकियो ५० प्रतिशत छायांकन
प्रदीप खड्का र जसिता गुरुङ स्टारर फिल्म ‘लभ स्टेशन’को आधा छायाँकन सकिएको छ । ११ आसोजबाट सुरु गरिएको फिल्मको छायाँकन ५० प्रतिशत सकिसकेको निर्माता गोबिन्द शाहीले जानकारी गराएका छन् । फिल्म लिली बिलीबाट चर्चामा आएका प्रदीप र जसितासँगै फिल्ममा रमेश बुढाथोकी, प्रकाश शाह, रेशु भट्टराई, बिनोद कुमार पौड्याल, प्रिया रिजाल, सरु बिष्ट, रवी डंगोल, दिनेश […]
बिपन र बर्षाको जोडी ‘जात्रै जात्रामा’
अभिनेता बिपिन कार्की र अभिनेत्री बर्षा राउतलाई लिएर नयाँ चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ बन्ने भएको छ । दुईबर्ष अघि निर्माण भएको चलचित्र ‘जात्रा’कै टिमले यो चलचित्र निर्माण गर्न लागेको हो । ‘जात्रा’ सफल भएसँगै त्यसैचलचित्रको सिक्वेलको रुपमा ‘जात्रै जात्रा’ निर्माण हुन लागेको हो । यो चलचित्रपनि प्रदीप भट्टराईले नै निर्देशन गर्नेछन् भने कलाकारहरु पनि दोहोरिनेछन् ।बिहीवार […]
चोलीको तुनामा ऋचा–छुल्ठिमको ठुम्का
काठमाडौं । फिल्म ‘न एता न उता’को गीत ‘चोलीको तुना’ सार्वजनिक भएको छ । मिलन जलन र राजन इशानको संगीत रहेको गीतमा राजन इशान, मिलन अमात्य, राजनराज शिवाकोटी र मिना सिङको स्वर तथा एकनारायण भण्डारीको शब्द छ ।गीतमा विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी छ भने गीतमा ऋचा शर्मा, छुल्तिम गुरुङ, समिरमणि दिक्षित र मिराज रोशनले फिचरिङ गरेका […]
फिल्म ‘चङ्गा चेट’ को ट्रेलर सार्वजनिक
रियल लाइफ कपल प्रियंका र आयुष्मानले पहिलो पटक एकै साथ रोमान्स गरेको फिल्म चङ्गा चेटको आधिकारिक ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। निर्माण टीमले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सो फिल्मको ट्रेलर रिलिज गरेको हो। चङ्गा चेटको ट्रेलरमा फिल्मका मुख्य कलाकारहरुलाई देखाइएको छ। कमेडी जनराको फिल्म भएका कारण ट्रेलरमा समेत पन्च लाइन सहितका संवादहरु समावेश गरिएको […]
फिल्म ‘दैलो’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
यहि कार्तिक ३० गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘दैलो’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा नेपाली गाउँ समाजमा घटने गरेका घटनाहरुलाई देखाईएको छ। अर्थात दाइजो,घरपरिवारको प्रेम लगायत सामाजिक बिषयबस्तुमा फिल्म आधारित रहेको ट्रेलरबाट अड्कल गर्न सकिन्छ। सुरेश उप्रेतीको निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्म ‘दैलो’ मा सुरेश उप्रेती,दुर्गा साउद,विकाश चापागाई,दीपक डोटेल,मुना प्रसाईं,दिक्षा आचार्य,प्रदिप अधिकारी,सपना श्रेष्ठ, अनु ढुंगाना तथा बाल कलाकार सुयोग उप्रेतीको […]
कमेडी फिल्म ‘न यता न उताको’ टीजर सार्वजनिक
तन्त्रालय फिल्म्स तथा हाइलाइट्स नेपालको संयुक्त प्रस्तुती रहेको फिल्म ‘न यता न उता’ को टीजर सार्वजनिक गरिएको छ। फिल्मको टीजरमा बिदेश मा खिचिएका केहि दृश्यहरु देखाईएको छ,त्यस्तै दुइ अधबैशेहरुको बिदेशबाट नेपाल फर्किएको सन्दर्भलाई जोडीएको छ। कमेडी जनराको फिल्म ‘ न यता न उता’ लाई मिराज रोश तथा विशारद बस्नेतले संयुक्त रुपमा निर्देशन गरेका हुन्। फिल्ममा स्टोरी र स्क्रिनप्ले […]
नीतालाई बजार लागेपछि ‘दी कर्मामा ‘
काठमाडौं । फिल्म ‘दि कर्मा’को पहिलो गीत ‘बजार लाग्या छ’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा नायिका नीता ढुंगाना र नायक करण बर्माले फिचरिङ गरेका छन् । भिडियोमा नायिका परमिता राज्यलक्ष्मी राणा रिसाहा लुक्समा छिन् भने बुद्दि तामाङलाई पनि देख्न सकिन्छ ।गीतमा कोशिस क्षेत्रीको शब्द तथा संगीत रहेको छ भने मनिषा पोखरेलको स्वर रहेको […]
कुञ्जना घिमिरे अर्थात सुन्तलिले चलचित्र निर्देशन गर्ने
सितारामले बनाउन लागेको चलचित्रको निर्देशन भने उनकै धर्मपत्नी कुञ्जना घिमिरेले गर्ने चर्चा चलेको छ । नेपालि चलचित्र क्षेत्रमा फेरि अर्कि निर्देशिका भित्रिने सम्भावना चाडैनै देखिएको छ​।
‘ए मेरो हजुर ३’को शुभमुर्हत
भाद्र १६ काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’को शुभमुर्हत गरिएको छ । चलचित्रमा नायक अनमोल केसी र नव नायिका सुहानफ थापाको मुख्य भूमिका रहने छ । चलचित्रका निर्देशक झरना थापा रहेकी छिन्= । शनिवार चलचित्रका निर्माण टिमहरू सहित पोखरामा पूजा गर्दै शुभमुर्हत गरिएको थियो । भमुर्हतमा चलचित्रका मुख्य कलाकारद्धय अनमोल र सुहाना साथमा […]
प्रमोदले देखेको यस्तो काठमाण्डु
काठमाडौं । फिल्म ‘कथा काठमाण्डु’को पहिलो गीत ‘रातको कुरा’ सार्वजनिक भएपछि गीतका प्रियंका कार्की र प्रमोद अग्रहरि चर्चामा आए । गीतमा उनीहरुले दिएको बोल्ड दृश्यले पोर्न हबमा समेत स्थान पायो । यही फिल्मको आइतबार राजधानीमा ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा फिल्मका तीन जोडीको फरक फरक कथालाई देखाइएको छ । ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा प्रमोदले […]
आर्यन र सृष्टिको मायाले बाँध्यो अमेरिकाका नेपाली दर्शकलाई
चलचित्र बाँधमायालेको अमेरिकामा शो सम्पन्न भएको छ । अगस्ट २८ तारिखमा सान्फ्रान्सिस्को शहरमा फिल्मको प्रिमियर भएको थियो । प्रिमियर शोमा नायक आर्यन अधिकारी उपस्थिति थियो । एक्सन लभ स्टोरी फिल्म बाँधमायाले हेरेपछि दर्शकहरु भावुक हुँदै हलबाट निस्किएको नायक अधिकारीले बताए । फिल्ममा समावेश एक्सन र लभ स्टोरीलाई दर्शकले रुचाएको आर्यनको भनाई छ । पुनः सेप्टेम्वर […]
फिल्म ‘अनुराग’को ट्रेलर सार्वजनिक
एलिजा गौतम, समुन्द्र पण्डितको डेब्यु भूमिका रहेको फिल्म ‘अनुराग’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । असोज १२ गतेबाट रिलिज हुने यस फिल्ममा समुन्द्र र एलिजाका अलावा समुन्द्र पण्डित, ठिलेन लामा, सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेल, शिशिर राना, मोहन निरौला लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।फिल्म ‘अनुराग’लाई भरत गौतम र गीता भेटवालले संयुक्त रुपमा निर्माण […]
नितिन चन्दले नयाँ सिनेमा निर्देशन गर्ने
नितिन चन्दले नयाँ सिनेमा निर्देशन गर्ने भएका छन् । यसअघि ‘जोनी जेन्टलम्यान’को निर्देशन गरेका उनले दोस्रो सिनेमाको नाम ‘गीत गजल’ जुराएका छन् । अघिल्लो सिनेमामा नायक पल शाह र आँचल शर्माको जोडी बनाएर काम गरेका उनले ‘गीत गजल’मा नयाँ कलाकारसँग काम गर्दैछन् । नितिनले ‘गीत गजल’मा मुख्य कलाकारमा रुप पोखरेल र आरोही सिंहलाई नेपाली सिनेमामा […]
यश कुमारको निर्देशन रहेको फिल्म ‘छिरिङ्ग’ को ट्रेलर सार्वजनिक
गायक तथा नायक यश कुमारको निर्देशन रहेको फिल्म ‘छिरिङ्ग’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । असोज १२ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै फिल्मको प्रोमो सार्वजनिक गरिएको हो । प्रोमो यशकुमार, निमा रुम्बा र कामना भुजेलबिचको प्रेम र द्धन्द्धलाई देख्न सकिन्छ । रिदम फिल्मसको प्रस्तुती रहेको फिल्म छिरिङ्गको कथा सविर श्रेष्ठको हो भने पटकथा यश कुमार र […]
फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को प्रोमो सार्वजनिक
फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र धिरज मगरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मको प्रोमो कलरफूल छ । कोरियोग्राफर रेनशा वान्तवा राईको डेव्यु निर्देशन रहेको ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’को ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ को प्रोमो सार्वजनिक भएसँगै फिल्मका अन्य नयाँ कलाकारहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । शाहरुक ताम्रकार, विजय लामा लगायत कलाकारहरुलाई […]
कमेडियनको डराएको रुप रामकहानीमा
आगामी भदौ २२ गतेबाट रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘रामकहानी’ दुई कारणले चर्चामा छ । पहिलो कारण यसका निर्देशक सुदर्शन थापाको ब्राण्ड भ्यालु र दोस्रो कारण फिल्ममा कमेडी कलाकारको बाहुल्यता हो । फिल्ममा आकाश श्रेष्ठ र पुजा शर्मा प्रमुख कलाकार भए पनि केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, विल्सनविक्रम राई ‘तक्मे बुढा’, जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ र रविन्द्र […]
‘चङ्गा चेट’मा जमेका तीन जोडीहरु – भिडियो
प्रिन्सेस मुभिजको ब्यानरमा दिपेन्द्र के खनालको निर्देशित चलचित्र ‘चङ्गा चेट’को पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ। सोमबार राजाधानिमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ‘गोजिमा दाम छैन’ बोलको गीत रिलिज गरिएको हो। सार्वजनिक गीतमा चलचित्रमा मुख्य तीन जोडी प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज जोशी, परमिता राज्यलक्ष्मी राना, सुरक्षा पन्त, रविन्द्र झा, सन्दीप क्षेत्रीलाई निकै नै रोमान्टिक मुडमा देखाइेको […]
काठमाडौं । आगामी भदौ १५ गते रिलिज हुने फिल्म ‘मेरी मामु’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा फिल्मका प्रमुख पात्र ७ वर्षे आयुब सेनलाई निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनी के कारणले आक्रामक छन् भन्न थाहा पाउन दर्शकले फिल्म नै हेर्नुपर्छ ।आशुषेसन फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा सन्तोष सेनको लगानी तथा यम थापाको […]
एकअर्कालाई मायाले बाँध्दै आर्यन–सृष्टि
काठमाडौं । फिल्म बाँध मायाले को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतको भिडियोमा अभिनेता आर्यन अधिकारी र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत भएका छन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ ।संगीतकार पोखरेलकै शब्द रहेको बाँध मायाले गीतमा अञ्जु पन्त र सुगम पोखरेलको स्वर छ । पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संगीतकार पोखरेलले […]
मह सञ्चारको ब्यानरमा दर्शकलाई दाल भात तरकारी
काठमाडौं । फिल्म ‘शत्रु गते’ टिमले नयाँ कमेडी फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ निर्माण गर्ने भएको छ । मह सञ्चारको ब्यानरमा किरण केसी प्रस्तुतकर्ता रहने फिल्मको बुधबार राजधानीमा घोषणा गरियो । फिल्मलाई निर्माता किरणकै छोरा सुदनले निर्देशन गर्नेछन् । दुई हलिउड फिल्म ‘रिमेम्बर मि’ र ‘माई लभ’मा सह–निर्देशक तथा ‘शत्रु गते’ मा सहायक निर्देशक बनिसकेका सुदनले […]
कथा काठमाण्डुको ‘जुन र ताराको कुरा’ रिलिज – भिडियो
संचारकर्मी तथा महिला निर्देशक संगीता श्रेष्ठ द्वारा निर्देशित चलचित्र ‘कथा काठमाण्डु’को दोश्रो गीत रिलिज गरिएको छ। ‘जुन अनी तारा’ बोलको उक्त गीतलाई बिहीवार सामाजिक संजाल युट्युब मार्फत रिलिज गरिएको हो। चलचित्रमा समावेश पहिलो गीत ‘रातका कुरा’ सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचनामा भएको थियो। चलचित्रका ६ पात्रहरुको चरित्र चित्रण गर्न खोजेको यस गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार प्रियंका […]
वोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल माथि पुजाको आक्रोस
सुदर्शन थापा निर्देशित नेपाली चलचित्र ‘रामकहानी’ र निरक पौडेलको ‘रोजी’ एकसाथ भाद्र २२ गते जुध्ने भएको छ । अभिनेता प्रदीप खड्काको प्रमुख भूमिका रहेको ‘रोजी’ आफ्नो चलचित्रसँग भिड्न तयार भएपछि ‘रामकहानी’ फेम्ड अभिनेत्री पूजा शर्माले फेसबुकमा आफ्नो कुरा पोखेकी छन् । नौ वर्ष अगाडि निरकको ‘कुसुमे रुमाल २’ सँग सुदर्शनले आफ्नो चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी […]
आर्यनको अंगालोमा बाँधिइन् सृष्टि ( फोटो फिचर)
आर्यनको अंगालोमा श्रृष्टी
सविर श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म ‘बाँध मायाले’ को शिर्ष गीतको छायाँकन सकिएको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा नायिका श्रृष्टी श्रेष्ठ नायक आर्यन अधिकारीको अंगालोमा बाँधिएकी छन् । तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै गीतप्रति चासो बढेको छ । अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतको भिडियोमा कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेका छन् । कुलेखानी र राजधानीमा पाँच दिन लगाएर फिल्मको गीत खिचिएको निर्देशक […]
४० वर्ष अगाडीको परिवेशमा आधारित रहेर विकास सुवेदीले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘काजीको घोडा’ शिर्षकको गीतमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेकी छन् । अहिलेको जेनेरेसनमा अत्याधिक रुचाइएकी स्वस्तिमालाई भिडियोमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटको क्वालिटीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।भिडियो सुरुवाती दृश्यले दर्शकलाई ब्याक एण्ड ह्वाइट दुनियाँमा लिएर जान्छ । जहाँ रेडियो नेपालबाट प्रशारण […]
‘छक्का पन्जा ३’ को गीत पहिलो नम्बरमा (हेर्नुस् भिडियो)
चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’ को पहिलो नम्बरमा बोल रहेको गीत रिलिज भएको छ। मल्टीस्टारर चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ सिक्वेल सधै प्रतिक्षित रहने गर्दछन्। गीत संगीतको कारण चर्चामा रहने चलचित्रको पहिलो प्रचार सामग्री स्वरूप चलचित्रको गीत सार्वजनिक भएको हो। ‘बैना स्विकार गरेर’ गीतमा डेविड शंकर र बिन्दु परियारको आवाज रहेको छ. गीतमा दिपक शर्माको संगीत र राजेन्द्र थापाको संगीत रहेको छ। कविराज गहतराजको […]
चलचित्र ‘मेरि मामु’मा ‘आमा’ बोलको गीतमा आमा बितेपछिको पिडा झल्कियो
आगामी भदौ १५ गतेबाट प्रदर्शन आउने चलचित्र ‘मेरि मामु’ को पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ‘आमा’ बोलको गीत रिलिज गरिएको हो। कल्याण सिंहको संगीत, रबी मल्लको शब्द र रोहित जोन क्षेत्रीको आवाज समावेश गरिएको उक्त गीत निकै राम्रो बनेको छ भने उक्त गीतलाई कार्यक्रमा उपस्थित भएका कलाकार र पत्रकार […]
’सुश्री सम्पति’ को पहिलो गीत सार्वजनिक
चलचित्र ’सुश्री सम्पति’ को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रमा सामबेश ‘हुकुम बक्सियोस्’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।फिल्मका तिन पात्र सलोन बस्नेत , सारा सिर्पाली र बिनोद न्यौपाने फिचर्ड गीतमा दरबारमा हुने भारदारको नृत्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ । आफुलाई राजा मान्ने क्यारेक्टरको भावनालाई गीतमा समेटिएको छ । झन्डै ८० भन्दा बढी कोरस […]
‘सिंहदरबार–२’ को टिजर सार्वजनिक
बहुप्रतिक्षित टेलिश्रृंखला ‘सिंहदरबार–२’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएस्एआईडी)को आर्थिक सहयोगमा सर्च फर कमन ग्राउण्ड र शुभ मिडिया होमले उत्पादन गरेको टेलिश्रृंखला ‘सिंहदरबार–२’ टिजर आज युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।टिजरमा गौरी मल्ल, प्रमोद अग्रहरी, रमेश रञ्जन झा, हेमन्त चालिसे, बादल भट्ट, प्रकाश घिमिरे, देशभक्त खनाल, आलोक थापा, प्रभात रिमाल, सबिना […]
‘नाई नभन्नु ल ५’ को ‘तिम्रो आखामा आखा जुदाई’ गीत सार्वजनिक (भिडियो)
‘नाई नभन्नु ल’को पाँचौ शृङ्खला ‘नाई नभन्नु ल ५’ को टाईटल गीतको ‘तिम्रो आखामा आखा जुदाई’बोलको पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा स्वस्तिमा खड्का र अभिषेक नेपाल फिचर्ड छन् । मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको छ भने दिनेश थापालियाको शब्द रहेको छ । भदौ ८ लाई प्रदर्शन मिति तय गरेको छ […]
चलचित्र ‘ब्ल्याक’ को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक(भिडियो)
केहि समय अघि ट्रेलर सार्वजनिक गरेर चर्चामा रहेको चलचित्र ‘ब्ल्याक’ को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘तिम्रो लागी’ बोल रहेको उक्त गीतमा चलचित्रका मुख्य पात्र आँचल र आकाशलाई फ़िचरिङ्ग गरिएको छ । स्वर अञ्जु पन्त र दीपक लिम्बुले स्वर रहेको उक्त गीतमा महेश खड्काको संगीत रहेको गीतमा डा.कृष्णहरी बारालको शब्द रहेको छ भने रामजी लामिछानेले गीतको कोरियोग्राफी गरेका छन ।प्रदीप […]
प्रियंका र प्रमोदको इन्टिमेट सिन , ‘रातको कुरा’गीत रिलिज (भिडियो)
रातको कुरा शहर भरी भन्ने गीत रिलिज भएको छ । यो गीतमा प्रियंका र अभिनेता प्रमोद अग्रहरिको इन्टिमेट सिन देखाइएको छ । गीत खुबै हट छ । प्रियंकाले बाहेक अन्य हिरोइनले यो दृश्य दिन सक्थे या सक्थेनन्, थाहा छैन । तर, यो गीत सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहना अभिनेत्री प्रियंका कार्की र उनका प्रेमी आयुष्मान […]
‘मिस्टर भर्जिन’को पोष्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘मिस्टर भर्जिन’को पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । तीन युवाको यौन मनोविज्ञानको कथालाई फिल्ममा देखाउन खोजिएको छ । वोर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिव्यूसन प्रा.लीको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई विशारद बस्नेतको निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, मरिश्का पोख्रेल, भोलाराज सापकोटा, रविन्द्र झा, सिर्जना सुब्बा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । ‘मिस्टर […]
‘हल्का माया’ बोलको गीत सार्वजनिक
नेपाली चलचित्र ‘मालिका’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । सुरेश अधिकारीको सङ्गीत, नर बहादुर कार्कीको शब्द र अञ्जु पन्तको स्वर रहेको ‘हल्का माया’ बोलको उक्त गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।अभिनेत्री रेखा थापाको नृत्य रहेको गीतको भिडियोलाई रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी गरेका छन् । गीतको छायाङ्कन जाजरकोट दरबारमा गरिएको छ । कार्तिक २१ गते ‘लक्ष्मी पुजा’को दिन […]
‘बाँध माया’ले टिजर रिलिज
आर्यन अधिकारी र सृष्टि श्रेष्ठ स्टारर फिल्म ‘बाँध मायाले’को टिजर रिलिज गरिएको छ । डेढ मिनेट लामो टिजरमा आर्यन र सृष्टिको लोभलाग्दो प्रेम र दुई बिचको द्धन्द्धलाई महसुश गर्न सकिन्छ । लभ स्टोरी फिल्म ‘बाँध मायाले’ असोज ५ गतेदेखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ । रामहरी धिताल र विभिषिका श्रेष्ठको संयुक्त लगानीमा बनेको फिल्मबाट किशोर खड्का नव […]
छक्का पञ्जा ३ को गीतको छायाँकन साकीयो
juy 15,2018 यसोदा सिग्देल बर्षातका बाबजुद फिल्म छक्का पञ्जा ३ को गीतको छायाँकन सकिएको छ । एक दर्जन कलाकार नाचेको गीतको छायाँकन एक साता लगाएर शनिबार सकिएको निर्देशक दिपाश्री निरौलाले बताइन् । यसपाली पानीले दुःख दियो, दीपाश्रीले भनिन्, जसो तसो गरी सुटिङ सक्यौं । अब एडिटिङगको काम हुँदैछ । दीपाका अनुसार पहिलो नम्वरमा बोलको गीत […]
प्रियंका-आयुष्मान इन्गेजमेन्टका १२ सुन्दर तस्बिर ,विवाह भन्ने कहिले ?
लामो समयदेखी प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडी कलाकार आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशी र नायिका प्रियंका कार्की बीच इन्गेजमेन्ट भएको छ । पारिवारीका जमघटमा दुबैले शनिवार टिकाटालो गरेका हुन् । मिडियामा लगातार प्रेम सम्बन्धको बारेमा सकरात्मक र नकरात्मक चर्चा चलिरहेको थियो । यसलाई सार्थकता दिदै दुबैले इन्गेजमेन्ट गरेका हुन् । कुनै समय प्रेम सम्बन्ध देखी दिदी भाई […]
फिलिपिन्समा आर्यन र सम्राज्ञीको रोमान्स (भिडियो)
नायक आर्यन सिग्देल निर्मित फिल्म कायराको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘सुखमा’ बोलको रोमान्टिक गीतमा आर्यनको साथमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई देख्न सकिन्छ सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गीतमा केतन क्षेत्रीको स्वर तथा कोशिश क्षेत्रीको शब्द तथा संगीत रहेको छ । गीतमा प्रविण सिंहको कोरियोग्राफी रहेको छ ।फिल्म ‘कायरा’ साउन १८ गतेबाट […]
‘नाई नभन्नु ल ५’ ट्रेलर रिलिज (भिडियो)
‘नाई नभन्नु ल’को पाँचौ शृङ्खला ‘नाई नभन्नु ल ५’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । भदौ ८ लाई प्रदर्शन मिति तय गरेको फेमिली ड्रामाको राजधानीको ‘क्यूज सिनेमा’ हलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बीच ट्रेलर रिलिज गरियो ।ट्रेलरमा लिड कलाकार अनुभव रेग्मी र सेड्रिना शर्माको प्रेमभाव झल्किएको छ भने यो पटक पनि निर्देशक विकासराज आचार्य दर्शक रुवाउन […]
मंगली बुद्धि छोडी विल्सन संग रोमान्स
गाउँघरमा अहिले पनि ‘साली कसको ?’ भनेर सोध्यो भने उत्तर ‘भेना’को भन्ने आउँछ । यही सन्दर्भलाई जोडेर चितवनका पुराना निर्माता प्रसाद श्रेष्ठले निर्माण गरेको फिल्म ‘साली कस्को भेनाको’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । कमेडी फ्लेबरमा निर्माण गरिएको ट्रेलर हाँस्य कलाकार विल्सनविक्रम राईको वरीपरी घुमेको छ । गाउँमा भेनाको रुपमा चिनिने विल्सनलाई उनकी सालीका रुपमा चिनाइएको […]
मेरी मामुको फष्ट लुक सार्वजनिक
आगामी भाद्र १५ गते आउने फिल्म मेरी मामुको फस्ट लुक सार्वजिक गरिएको छ । सन्तोष सेनको ब्यानर आसुसेन फिल्मसको चौथो प्रस्तुती रहेको फिल्म मेरी मामु मा निर्माता सेनका छ वर्षे छोरा आयुव सेन मुख्य भुमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । छायानंकनमा जानु अघिनै चर्चा बटुलेको चलचित्र मेरी मामु को फस्ट लुकमा मुख्य अभिनेता आयुवलाई नै […]
कस्मिक लभ छायांकन धमाधम
मुभी मेकर्सको ब्यानरमा बन्दै गरेको चलचित्र ‘कस्मिक लभ’ को छायांकन धमाधम भइरहेको छ । निर्माण टीमले केहि समय अघि मात्रै काठमाण्डौमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रको आधिकारिक घोषणा सहित शुभसाइत गरेको थियो । चलचित्र ‘कस्मिक लभ’छाय को गत असार ११ बाट छायांकन शुरु गरिएको हो। अहिले चलचित्रको ललितपुर स्थीत बज्रबाराहीमा शुटिङ भइरहेको छ। यसै बीच निर्माण टीमले शुटीङ सेटका केहि तस्बिर समेत सार्वजनिक […]
पुर्व मिस नेपाल निकीता चन्दक को ‘रानी महल’ नबन्ने
पहिले नै विवादमा परेको फिल्म रानी महलले तामझाम सहित निर्माण घोषणा गरेको थियो । २० प्रतिशत मात्रै सुटिङ भएको रानी महल अब निर्माण नहुन्ने पक्का जस्तै भएको छ । उक्त फिल्ममा पूर्व मिस नेपाल निकिता चन्दकले डेब्यु गर्न लागेकी थिईन् । तर उनको त्यो पहिलो निर्णय खेर जाने डर भएको छ । निर्देशक र निर्माण टिमले […]
साम्रज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र धिरज मगर को प्रेम इन्टुमिन्टु लन्डनमा
आउँदो असोज ५ बाट देशभर रिलिज हुने फिल्म इन्टुमिन्टु लन्डनमा को टिजर सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा विक्रम लामा र एन्जिला खत्रीको कोरियोग्राफी रहेको छ ।लभस्टोरी जनराको उक्त फिल्मलाई रेनसा बान्तवा राईले पहिलो पटक निर्देशन गरेकी हुन् । रेनाशा फिल्म ईन्टुमिन्टु लण्डनमा बाट कोरियाग्राफरसँगै निर्देशक बनेकी हुन् । फिल्ममा शैलेन्द्र ध्वज कार्कीको छाँयाङ्कन र कृष्ण […]
फिल्म ‘भैरे’को प्रोमो रिलिज
दयाहाङ राईको शिर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘भैरे’को प्रोमो रिलिज भएको छ । कमेडी, एक्सन, रोमान्स र पिडा समेटिएको प्रोमोमा दया/सुरक्षा पन्तको जोडी र बर्षा सिवाकोटी/बुद्दी तामाङको जोडी प्रस्तुत गरिएको छ ।एभरेस्ट सुर्य बोहराले लेखन र निर्देशन गरेको फिल्ममा विक्रान्त बस्नेत, अर्जुन गुरुङ, जयनन्द लामा, सुनिल थापा, अनुभव रेग्मी लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ ।साउन […]
‘कस्मिक लभ’को घोषणा पाँचतारे होटल अन्नपूर्णमा
चलचित्र ‘कस्मिक लभ’को घोषणा गरिएको छ । मुभी मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुने यस चलचित्रलाई वी.एस बलामी र एस अधिकारीले निर्देशन गर्न लागेका हुन् । अर्पण थापा, प्रशान्त ताम्राकार र अभिनेत्री दीया मास्केको लिड रोल रहने यो फिल्मको पाँचतारे होटल अन्नपूर्णमा एक कार्यक्रमका बीच मुर्हूत गरिएको छ ।चलचित्रमा अर्पण थापा, प्रशान्त ताम्राकार, दिया मास्के, रविन तामाङ, […]
अमृत र करुणाको बाहिरियो येस्तो लुक्स, सकियो ‘सय कडा दश’ छायाँकन
हास्यकलाकार मनोज गजुरेलको डेव्यु चलचित्र ‘सय कडा दश’ को छायाँकन सम्पन्न भएको छ । चलचित्रको छायाँकन सम्पन्न भए संगै निर्माण टिमले मुख्य दुई कलाकार अमृत ढुंगाना र करुणा श्रेष्ठ फिचर फस्क लुक सार्वजनिक गरेको छ । काठमान्डौ, पोखरा, सिन्धुली र पाँचथरमा छायाँकन गरिएको चलचित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार समाज निर्माणका लागि पात्रले गर्ने सङ्घर्षको कथामा निर्माण हुनेछ […]
कार्टुन्ज क्रिउको ‘माया लुकी लुकी’ सार्वजनिक
‘नाइँ मलाइ था छैन’, ‘सेल्फीको जमाना’, ‘भिज्यो परेली’ जस्ता हिट गीतकी गायिका टिका प्रसाईंको नयाँ गीत ‘माया लुकी लुकी’ सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा आनन्द अधिकारीको शब्द, आशिस अविरलको संगीत तथा संगीत संयोजन रहेको छ ।भिडियोमा ज्ञानेन्द्र शर्माको छायाङ्कन, कार्टुन्ज क्रिउको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई कार्टुन्ज क्रिउ कै सरोज अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन भने सम्पादन […]
प्रदीप खड्का र मिलन चाम्स को देखौटी अंकमाल
नायक प्रदीप खड्कालाई लिएर निर्माण गर्न लागिएको चलचित्र ‘लभ स्टेशन’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ ।चलचित्रमा नायक प्रदीप मुख्य भूमिकामा रहनेछन् भने नायिका फाइनल भइसकेको छैन ।चलचित्रले प्रदर्शनको ५१ औ दिन मनाउन सफल भयो। तर चलचित्र रिलिज लगत्तै दुवैको सम्बन्ध चिसिएको खबर बाहिरियो। कति सम्म भने निर्देशक मिलन चाम्सले प्रदिप संग भविष्यमा कुनै सहकार्य नहुने र […]
प्रदिप र जसिताको जोडी फेरी एकपटक पर्दामा
चलचित्र ‘लिलिबिली’ डेव्यु गर्ल जसिता गुरुङको दोश्रो चलचित्र फाइनल भएको छ। हाल बेलायत रहेकी जसिताले दोस्रो चलचित्रमा पनि डेव्यु नायक प्रदिप खड्का संग रोमान्स गर्ने भएको छिन्। प्रदिप खड्का र गोविन्द शाहीले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने चलचित्र नाम ‘लभ स्टेशन’ राखिएको छ। चलचित्रलाई उज्ज्वल घिमिरेले निर्देशन गर्नेछन्।बुझीएअनुसार चलचित्रमा तीन जना मुख्य अभिनेत्री रहनेछन् भने चलचित्रका […]
‘जय शम्भु’को फस्टलुक सार्वजनिक
भदौ १ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘जय शम्भु’को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ । सेड्यूल भन्दा धेरै समय लगाएर छायांकन गरिएको यो चलचित्रको बजेट पनि धेरै लागेको निर्माणपक्षले बताएको छ ।यो चलचित्रमा प्रशान्त ताम्राकार, अनुप विक्रम शाही र बर्षा शिवाकोटीको मूख्य भूमिका छ । पोष्टरमा प्रशान्त ताम्राकार र अनुप विक्रमको एक्शन अवतारलाई देखाइएको छ […]
नम्रता श्रेष्ठको नयाँ लुक्स ‘जाइरा’ मा
मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्र जायराका कलाकारको लुक्स भिन्न शैलीमा सार्वजनिक गरियो ।यस फिल्मका लागि आफ्नो लोभलाग्दो कपाल छोट्याएकी अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठउलाई मार्शल आर्ट्स लुक्स देखा परिन साथै डेब्यू गर्ल सृजना रेग्मी पनि मार्शल आर्ट्स लुक्समै उपस्थित भइन्यस फिल्ममा नम्रताका साथमा अनुप बिक्रम शाही, रेमनदास श्रेष्ठ, सिर्जना रेग्मी, प्रमोद अग्रहरी, सम्राट मगर, सुजिता श्रेष्ठको […]
फिल्म कुम्भ करणको ट्रेलर रिलज
फिल्म कुम्भ करणको राजधानिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गदै ट्रेलर रिलज गरिएको छ । पल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ’कुम्भ करण’ नेपालसँगै अव अष्ट्रेलियामा पनि रिलिज हुने भएको छ । फिल्म यही असार २२ गतेबाट नेपाल र अस्ट्रेलियामा एकसाथ प्रदर्शन हुन लागेको हो । फिल्ममा गौरव पहाडी, निशा अधिकारी, भोला सापकोटा, अभय बराल, आकाश पल, प्रमोद अग्र्हारी, […]
प्रेमिकाको हत्या गरेका प्रदिप खड्का जेलमा
अभिनेता प्रदिप खड्का आज प्रेसमिटमा भिन्न रुपमा प्रस्तूत भए। लामो कपाल र झुस्स दारीमा उनि बालाजुमा उपस्थित भएका थिए। काठमाण्डौको बालाजुमा रहेको एनएफडीसीको परिसरमा बुधबार उनि हातमा हथकडी सहित अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनि नयाँ चलचित्र रोजीका लागी यस्तो गेटअपमा देखिएका हुन्। बुधबार सम्पन्न भएको चलचित्रको शुभमुहर्तमा देखिएको उनको यो गेटअप निकै फरक र चिन्न […]
अनुरागको दोस्रो गीत सार्वजनिक
फिल्म अनुरागको दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियोमा एलिजा गौतम र समून्द्र पन्डितलाई रोमान्टिक मूडमा देख्न सकिन्छ । फिल्म युनिटले सामाजिक सञ्जाल युट्यबबाट उक्त गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । गीतमा सुगम पोख्रेल र अन्जु पन्तको स्वर र सरोज पोख्रेलको संगीत रहेको छ । गीतको भिडियोलाई विक्रम स्वारले कोरियोग्राफ गरेका हुन् ।सत्यराज चौंलागाईंको डेब्यु निर्देशन […]
यस्तो देखिन्छछ महानायक रजेश हमाल र नायक शिव श्रेस्ठ एउटै फिल्म्मा / फिल्म बागमती युटुबमा
गत केहि समय अघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘बागमती’ युबटुब मा सार्वजनिक भएको छ। प्रर्दशनका क्रममा तीनवटा कारणले चर्चामा रहेको यो सिनेमा युबटुबमा रिलिज भएपछि झन् चर्चा पाउने आशा गरिएको छ।सिनेमा प्रदर्शनको क्रममा चर्चामा रहेको तीन कारण प्रमुख मानिएका छन। पहिलो चलचित्र ‘बागमती’मा नेपाली चलचित्रका पुराना दुई नायक शिव श्रेष्ठ र राजेश हमालले धेरैपछि स्क्रिन […]
कस्तो देखियो शिवका छोराको र करिश्माकी छोरी जोडी ?
नायक शिव श्रेष्ठको प्रस्तुतीमा तयार भएको चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को एक्सन टिजर आज रिलिज गरिएको छ । एक्सनलाई महत्व दिइएको टिजरलाई यूवापुस्तालाई टार्गेट गरेर तयार पारिएको छ ।यो चलचित्रको हाल धमाधम छायांकन भैरहेको छ । चलचित्रलाई दिपेश सापकोटाले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रलाई यशोधा राई र दिनेश दर्शनधारीले निर्माण गरेका हुन् ।टिजर सार्वजनिक […]
‘चङ्गा’को ट्रेलर रिलिज
‘चङ्गा’को ट्रेलर रिलिज भएको छ । जेठ २५ गते रिलिज हुने फिल्ममा कमेडी, लब तथा एक्सन जनरामा बनेको पारिवारिक तथा सामाजिक कथा बोल्ने फिल्ममा बुद्धी तमाङ, कमलमणि नेपाल, राजन खतिवडा, रेश्मा तिमल्सिना ‘बुनु मैंचा’, अंकित खड्का, लक्ष्मी बर्देवा, प्रेमबर्षा खड्का, बाल कलाकार लकी भण्डारी, लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा रविन आचार्यको छायांकन, राजनराज शिवाकोटी […]
बल्छि धुर्बे ले गरे बिबाह
६ वर्षको प्रेमपछि बल्छिले गरे विवाह । हास्य टेलिसिरियल ‘मेरीबास्सै’ मा बल्छि धुर्बे नामबाट परिचित मरिचमान श्रेष्ठ आज वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । बल्छिले लमजुङ भोटेओडारकी करुणा खड्कासग प्रेम विवाह गरेका छन् । उनले ६ वर्ष लामो प्रेमलाई विवाहमा बदलेका हुन् ।शुक्रबार काठमाण्डौको म्हेपी मन्दिरमा परम्परा अनुसार विवाह सम्पन्न गरेका छन् । मन्दिरबाट […]
अशोक दर्जीको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ सार्वजनिक
बालगायक अशोक दर्जीको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो की धन बिनाको मन’ बुधबार सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित ‘स्टुडियो नाइन’मा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उक्त गीतको म्युजिक भिडियो रिलिज गरिएको हो। गीत रिलिज गर्न बालगायक प्लेन चढेर झापाबाट काठमाडौँ आएका थिए। गीतमा बिराज नेपालको शब्द रहेको छ भने सङ्गीत गायक तथा सङ्गीतकार […]
अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चचाईज प्याजेन्ट ‘म्यान अफ द वर्ल्ड’ घोषणा
अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चचाईज प्याजेन्ट ‘म्यान अफ द वर्ल्ड’को नेपाली संस्करण ‘मन अफ द वर्ल्ड नेपाल’को औपचारिक घोषणा भएको छ फिलिपिन्सबाट सुरु भएको उक्त प्याजेन्ट अब नेपालमा हुन लागेको हो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गराउदै आयोजक टिमले उक्त प्याजेन्टको घोषणा गरेको हो। यहि बैसाख ३० गतेबाट सुरु हुने अडिसन चितवन, बुटवल, बिराटनगर र धरान हुदै काठमाडौँमा आएर […]
द्वन्द्धत्माक कमेडी झमक बहादुरको ट्रेलर
फिल्म झमक बहादुरको ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । फिल्ममा अनुपविक्रम शाही, यादब देबकोटा ( सरापे ), राजु कमेडी, सुजता थापा, कल्याण अधिकारी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । निर्देशक भोमन कटुवालको निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा मिनकुमार तमाङ को लगानी रहेको छ । नेपाली समाजको वास्तवीक चित्र झुपडिमा बस्ने र महलमा बस्ने बिचको द्वन्द्धत्माक कमेडी रहेको […]
‘हैरान’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक
फिल्मलाई विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टले निर्देशन गरेका छन् । गीतमा शब्द र संगीत सत्यराज आचार्य र स्वरूपराज आचार्यको रहेको छ भने यसलाई सत्य(स्वरूपले सरगम आचार्य र बबिता मनाधरसंग मिलेर गाएका छन् । गम्भीर विष्टको कोरियोग्राफीमा तयार गीतमा सरोज खनाल , सत्यराज आचार्य , निर्मल शर्मा ,गजित विष्ट , सागर लम्साल , निश्मा घिमिरे , एन्जल राई […]
खगेन्द्र र सुरक्षाको लिएर बनाउने भए ‘गोपी
बुधबार राजधानीमा एक समारोहबीच उनले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘गोपी’को निर्माण घोषणा गरे । धनपति पछि अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त पुन चलचित्रमा जोडी बनेर आउँदैछन् । चलचित्र ‘गोपि’मा यी दुई जोडी बनेर प्रस्तुत हुन लागेका हुन् । चलचित्रको कथाबस्तु राम्रो भएकाले आफुहरुले अभिनय गर्न लागेको यी जोडीले बताएका छन् ।चलचित्र घामपानीका निर्देशक दीपेन्द्र […]
” तिम्रो लागि म छु ”आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा रामकहनीमा
फिल्म रामकहनीको पहिलो गीत ” तिम्रो लागि म छु ” सार्वजनिक भएको छ ।फिल्ममा पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, केदार घिमिरे, विल्सन विक्रम राई लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।गीतमा अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा संगीत, सुगम पोखरेल र अन्जु पन्तको स्वर रहेको छ ।निर्देशक सुदर्शन थापाको होम प्रोडक्शनमा निर्माण भएको फिल्म रामकहानी यही भदौ २२ गते […]
यस्तो देखियो भैरेको पोष्टर
फिल्म ‘भैरे’ को पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । फिल्म युनिटले सामाजिक सञ्जालबाट उक्त पोष्टर सार्वजनिक गरेका हुन् । पोष्टरमा फिल्मका लिड कलाकारहरु फिर्चड छन् । फिल्ममा पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, एभरेष्ट सूर्य बोहराको लेखन तथा निर्देशन, सूर्य थोक्करको द्वन्द्व र बनिष शाहको सम्पादन रहेको छ ।फिल्मका निर्माता प्रेम प्रसाद पौडेल र देवीमाया अधिकारी हुन् भने […]
देशव्यापी प्रतिभाको खोजीमा “हैरान” ,२० गते झापाबाट शुरु
चलचित्र ‘हैरान’ ले मनोरन्जन विधामा सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाको खोजि गर्ने भएको छ । हैरान च्यालेन्ज अन्तर्गत निर्माण टिमले ‘राष्ट्रिय प्रतिभाको खोजि’ गर्ने भएको छ । नृत्य , अभिनय र गायन विधामा प्रतिभाको खोजि वैशाख २० गते झापाबाट अडिसन सुरु हुने भएको छ । प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी देशको विभिन्न भागमा राष्ट्रिय प्रतिभाको खोजी अभियान शुरु गर्न […]
‘झ्वाइयँ झान’सार्वजनिक‘कहीँ कतै’को गीत
फिल्म ‘कहीँ कतै’को गीत ‘झ्वाइयँ झान’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा गौरव दर्पणको शब्द, सचिन सिंहको संगीत रहेको छ ।उमा फिल्म्स प्रालीको प्रस्तुती रहेको फिल्ममा नव नायक सोनाम बर्फुङ्पा र नव नायिका सिवानी गिरीको मुख्य अभिनय रहेको छ । सचिन सँगै सिर्जना सिलालको स्वर रहेको छ । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कबिराज गहतराजको कोरियोग्राफी […]
प्रियंका र दयाहाङ ’ह्याप्पी डेज ’ गीत रोमन्टिक मुडमा
फिल्म ’ह्याप्पी डेज’ को गीत सार्बजनिक भएको छ । गीतमा प्रियंका कार्की र दयाहाङ राईलई रोमान्टिक मुडमा देख्न सकिन्छ । गीतमा तारा प्रकाश लिम्बु र दिपा लामाको स्वर रहेको छ । लन्डन सिने आइ र चाम्स इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘ह्याप्पी डेजमा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, संजय गुप्ता, विक्की जोशी, शिशिर राणा, रुपा पुन, […]
‘ब्ल्याक’मा भीएफएक्सको कमाल
जेठ ११ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘ब्ल्याक’मा उच्च भीएफएक्स प्रयोग गरिएको निर्देशक प्रदिप श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले भने-‘छायांकनमा जति खर्च र मिहिनेत भयो छ । चलचित्रका दृश्यलाई भीएफएक्स गर्न मात्र १ बर्ष लाग्यो ।’ अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै नेपाली चलचित्रको स्तरको झल्को दिने गरि काम भैरहेको उनले दाबी समेत गरेका छन् । निर्देशक श्रेष्ठले चलचित्रको आधा […]
‘बाँध मायाले’ असोजमा आर्यन अधिकारी र श्रीष्टि श्रेष्ठको
चलचित्र ‘बाँध मायाले’को प्रदर्शन मिति सार्वजनीक भएको छ। निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार चलचित्र यहि आउँदो असोज ५ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँने भएको छ। रामहरी धिताल र विभेषिका श्रेष्ठको संयुक्त लगानीमा बनेको चलचित्रमा महेन्द्र अधिकारी र केदार धिताल सह निर्माताको रुपमा प्रस्तुत भएका छ। आर्यन अधिकारी र पुर्व मिस नेपाल श्रीष्टि श्रेष्ठ अभिनित चलचित्रको मुखेपात्र […]
शिव श्रेष्ठ को फिल्ममा छोरा शक्तिलाई हिरो
काठमाडौं । लामो समयसम्म नेपाली फिल्ममा ‘हिरो’का रुपमा अभिनय गरेका अभिनेता शिव श्रेष्ठ छोरा शक्तिलाई ‘हिरो’का रुपमा डेब्यु गराउँदै फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ बनाउने भएका छन् । केही दिन अघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको उपस्थितिमा शिवले आफ्नो फिल्मको घोषणा गरेका हुन् ।फिल्ममा शिवसँगै दिनेश दर्शनधारी, यशोदा राई निर्माता तथा सुनील कट्वाल, दिनेश थापामगर, खुम तामाङ, […]
‘वीराङ्गना’ रिलिज कन्फर्म गरे
फिल्म ‘वीराङ्गना’ को अफिसियल रिलिज डेट घोषणा गरिएको छ । निर्देशक राजबहादुर सानेले यस फिल्मलाई असार २९ गते प्रदर्शनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । फिल्ममा शिल्पा र अनुपले सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा निर्वाहा देखाको छ । बाबुराम दास, श्याम बहादुर थापा, रघु परियार र विमला भट्ट निर्माता तथा देव तामाङ सह-निर्माता रहेको ‘वीराङ्गना’ र्फोथ आई मुभिजको ब्यानरमा निर्माण […]
‘तिमि हुन्छौ जहाँ जहाँ’को पहिलो गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ । चलचित्र ‘तिमि हुन्छौ जहाँ जहाँ’को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । बि एण्ड बि फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रलाई निशाल बस्यालले निर्देशन गरेका हुन् ।यो बिशालको डेब्यु निर्देशन चलचित्र हो । मदन दवाडी, चन्द्र दवाडी र प्रसाद अधिकारीको लगानी रहेको चलचित्रमा मनिष सुन्दर श्रेष्ठ, मलिन जोशी, स्वरूप पुरुष ढकाललगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ । […]
बिपिन र नम्रता श्रीमान्–श्रीमती बन्दै ” प्रसाद”मा
बिपिन कार्की र नम्रता श्रेष्ठको जोडीमा ‘प्रसाद’ बन्ने भएको छ । चलचित्रलाई दिनेश राउतले निर्देशन गर्दै छन् भने दिनेशको निर्देशन र नम्रताको अभिनय रहेको यो चौथो चलचित्र हो । चलचित्रमा विपिन र नम्राताको साथमा नवीन मानन्धरको मुख्य भूमिका रहने भनेका छन ।सुभाष थापाको लगानीमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रको कथा भने सुशील पौडेलले लेखेका हुन् । […]
दयाहाङ र प्रियंकाको ‘ह्याप्पी डेज’ बैशाख १४मा आउने भयो
अब ‘ह्याप्पी डेज’ बैशाख १४ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । केहि समय अघि रिलिज मिति तय गरिए पनि बिशेष कारण बश रिलिज हुन नसकेको चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’ नयाँ मिति तय गरिएको छ। पटक पटक रिलिज मिति हेरफेर गरिए पनि अब बैशाख १४ चलचित्र रिलिज हुने चाम्सले बताए । चलचित्रलाई मिलन चाम्सले निर्देशन गरेका हुन् […]
चलचित्र ‘डमरुको डन्डीबियो’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
चलचित्र ‘डमरुको डन्डीबियो’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।‘डमरुको डन्डीबियो’लाई छेतेन गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् ।चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा निर्माण टिमले लोपोन्मुख डन्डीबियो खेलको बारेमा स्मरण गराउन ‘ठ्याक लाउने च्यालेन्ज’ पनि सुरु गरिसकेको छ । चलचित्रमा खगेन्द्र लामिछाने, मेनुका प्रधान, बुद्दी तामाङ, अनुप बराल, अंकित खड्का, आशान्त शर्मा, लक्ष्मी बर्देवा, मिश्री थापा, इंगि होपू कोइंच सुनवार, […]
‘हैरान’ को फर्स्टलुक पोष्टर सार्वजनिक
विश्कै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘हैरान’ को फर्स्टलुक पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको पोष्टर सार्वजनिक गरिएको हो । कमेडी जनरामा तयार पारिएको फिल्ममा सरोज खनाल,सत्य राज आचार्य , गजित विष्ट, मोहमद वसिम राजा, निश्मा घिमिरे, बुद्धि तामाङ , पुष्कर रेग्मी, एन्जल राई, सागर लम्साल, आरोही शर्मा लगायतको […]
“कृ” को गीत उकालीमा पछि पछि हटाइ ढुक ढुकी राखे
शम्भु प्रधानले निर्देशन गरेको पुरानो फिल्म को गीत उकालीमा पछि पछि गीतलाई फेरि रेकर्ड गरि फिल्म कृ मा राखिएको थियो । यो गित फिल्ममा राखिए पछि विवाद हुन गएको हो । आफ्नो फिल्मको गीत चोरीए पछि पुराना निर्देशक शम्भु प्रधान कानुनी कारबाहिमा गएका थिए । अन्त्यमा सुवास गिरी र शम्भू प्रधान बीच ११ लाखमा केही र्सतहरु राखि […]
आकाश श्रेष्ठ एउटा साथी खोजी रहेछु आंचल शर्मा लाई
फिल्म ‘ब्ल्याक’ को दोश्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । डा. कविराज बान्तवाको शब्द रहेको छ भने । महेश खड्काको संगीत र सुगम पोखरेलको स्वरमा फिल्मको ‘पल पल हरपल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिए छ। गीतमा समीर मिया र श्री कृष्ण श्रेष्ठको भी.एफ.एक्स रहेको छ ।यस फिल्मलाई प्रदिप श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा आँचल र आकाशसँगै […]
लोकप्रिय नायक/नायिकामा प्रदीप खड्का र साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह
शुक्रबार काठमाडौँको आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न फान अवार्डमा वर्ष लोकप्रिय नायक/नायिकामा प्रदीप खड्का र साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र चलचित्र पत्रकार विशेष सम्मानबाट धुर्व लम्साल र लक्ष्मण सुवेदी सम्मानित भएका छन् ।मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम अनि कमेडी सहितको यस कार्यक्रममा संचालकहरु पनि भाग- भागमा फेरिका थिए ।
फान अवार्ड २०७४ सम्पन्न, छक्का पञ्ज उत्कृष्ट फिल्म
दोश्रो फान अवार्ड २०७४ मा छक्का पञ्ज उत्कृष्ट फिल्म घोषित भएको छ । यस्तै निर्देशक दीपाश्री निरौलाले अवार्ड पाईन् । यता प्रदिप भट्टराईले जात्रा फिल्मबाट उत्कृष्ट कथाको अवार्ड पाए । अभिनय तर्फ उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जात्राबाटै विपिन कार्कीले जितेका छन् भने डाइङ क्याण्डलबाट सृजना सुब्बाले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड हात पारेकी छिन् । उत्कृष्ट निर्देशकको […]
‘दाइ नभन्नू ल’ कालीप्रसादले ल्याए (भिडियोसहित)
गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटाको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ’दाइ नभन्नू ल’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो गीतबाट नयाँ डान्स ग्रुप नेपाली संगीत उद्योगमा भित्रिएको छ । यसअघि चलचित्र ‘पुरानो डुङ्गा’ को ‘निर’ गीतको कभर गरेर चर्चित भएको र ‘मिस्टर झोले’को गीत ‘ओखती’को कभर भिडियो प्रतियोगितामा प्रथम भएको ‘क्रिष्टल क्लज डान्स ग्रुप’ले ‘दाइ नभन्नु […]
12 मासेको गित सार्वजनिक ढिक्के फुली
चलचित्र १२ मासेको ढिक्के फुली बोलको नयाँ गीत सार्बजनिक भएको छ । आमा पार्वती देबी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा बन्न लागेको उक्त चलचित्रमा जय किशन बस्नेत र पूजना प्रधानको मुख्य अभिनय रहेको छ । अहिलेका निकैनै व्यस्त र चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको उक्त गीतमा सागर खरेलको शब्द छ भने आवाज गायक कृष्ण पाण्डेको रहेको छ। […]
फिल्म लिलिबिलीमा प्रदिप खड्काको मनको परी प्रियंका कार्की ( गीत )
निर्देशक मिलन चाम्सले निर्माण तथा निर्देशन गरेको फिल्म लिलिबिलीको तेश्रो गीत हावा सरी सार्वजनिक गरिएको छ । गीतको भिडीयोमा प्रदिप र प्रियंकालाई रोमान्टिक मुडमा देख्न सकिन्छ । संगीतको शब्द दिपेन्द्र घिमिरेले लेखेका हुन् । हावा सरी बोलको गीतमा एस. डी योगी र मेनुका पौडेलको स्वर रहेको छ भने एस. डी योगीको संगीत रहेको छ । […]
तिमी सँग प्रदेश दौडाहामा
काठमाडौं । आगामी चैत २३ गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुने फिल्म ‘तिमी सँग’ युनिट फिल्मको प्रमोसनका लागि चितवन गएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली फिल्म प्रमोसनका लागि मोफसल दौडाहा भइरहँदा कलाकार शिशिर राणाको निर्माण र निर्देशनमा बनेको यो फिल्मका कलाकारले शनिवार चितवनका पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । चितवन जाने टोलीमा फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक शिशिर राणा, नायिका […]
अमेरिका ब्वाइज टिजरमा पानको चर्चा
अमेरिका जान चाहने युवाको कथालाई प्रस्तुत गरिएको फिल्म ‘अमेरिका ब्वाईज’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । प्रवेश पौडेलको डेब्यु निर्देशनमा बनेको फिल्मले वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई उठान गरेको छ । काश भुजेल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा अर्पण थापा, सृष्टि कार्की, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरासिया, सुनिल थापा, हरिहर शर्मा, अभय बराल, मनिष राउत, रुबि राना, सुवास गजुरेललगायतको अभिनय […]
बोबी टिजरमा प्रेम–रोदन सार्वजनिक
फिल्म ‘बोबी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । मिलन चाम्स निर्मित एवं निर्देशित फिल्ममा कविता गुरुङ र उमेश थापाको वास्तविक प्रेमकथालाई दर्शकले उनीहरुकै अभिनयमार्फत हेर्न पाउनेछन् । शुक्रबार सार्वजनिक ट्रेलरमा विदेशको भर्जिन लोकेशनमा कविता र उमेशको रोमान्ससँगै उनीहरुको प्रेममा आएको टकरावलाई देखाइएको छ ।विवाहित कविता र उमेश नर्वेका एनआरएन हुन् । फिल्ममा विजय लामा, रुबी […]
‘चङ्गा जस्तै’ सार्वजनिक फिल्म ब्ल्याकको
फिल्म ब्ल्याकको ‘चङ्गा जस्तै’ बोलको सार्वजनिक भएको छ । मुख्य अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र सुदर्शन सिग्देल जित तामांग सुबाश श्रेष्ठ सहितको टिम रहेको छ । यस गीतमा प्रतिक पौडेलको स्वर शब्द र संगीत समावेश छन् । बिहिबार राजधानीमा आयोजित प्रेम भेटघाटमा गीतलाई दर्शकले रुचाईदिनु हुनेमा आशावादी रहेको गायक पौडेलले बताए । गीतमा रामजी लामिछानेको करियोग्राफी रहेको […]
करियोग्राफीको उच्च प्रसंसा ‘भैर’को गीत रिलिज,
फिल्म भैरको पहिलो गीत ‘सान्नानीलाई भेट्न आउँदा’ सार्वजनी भएको छ । बसन्त सापकोटाद्वारा संगीतबद्ध यस गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकारहरु बुद्धि तामाङ, वर्षा सिवाकोटी र विक्रान्त बस्नेतको अभिनय देख्न सकिन्छ । गायक यम बराल, मेलिना राइ अनि संगीतकार बसन्त कै आवाजमा तयार भएको यस गीतलाई काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देखाईयो । शुक्रबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गीतको […]
‘सुपरस्टार नाइट्स’ हुँदै कतारमा आज
नेपाली कला, संकृति र सांगीतिक क्षत्रेलाई विश्वका विभिन्न देशमा पुर्‍याउने उद्देश्य लिएर आज बेलुकी कतारमा ‘कुमारी बुम सुपरस्टार नाइट्स’को आयोजना हुँदैछ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कलाकारको जम्बो टोली कतार पुगिसकेको छ । कलाकारहरु पनि कार्यक्रमलाई लिएर निकै उत्साहित देखिएका छन् । ‘एम्पी थिएटरमा पहिलो पटक प्रस्तुति दिदै छु’ कतार आईपुगेका गायक अनिल सिंह भन्छन् […]
अहिले चलचित्रको ट्रेलर वा गीतले युटुबमा राम्रो भ्यूज छोटो समयमा नै पायो भन्दैमा मख्ख परिहाल्ने अवस्था छैन । कारण, भ्यूजमा रेकर्ड राख्ने लोभमा अहिले निर्माताहरु महंगो रकम खर्चिएर दर्शक संख्या किनिरहेका छन् । जसलेगर्दा, कुनै पनि ट्रेलर वा गीतको अर्गानिक भ्युज कति हो भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्माता छविराज ओझाको निर्माणमा तयार भएको […]
नेपाल भ्रमण रोकियो सलमान खानको
१९ फागुन, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानको कार्यक्रमप्रति विप्लवले आपत्ति जनाए पछी उनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ । ‘दबंग द टुर’ १० मार्चमा काठमाडौंमा हुने तय भएको थियो । टुँडिखेलमा हुने शोमा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल लगायतका कलाकार पनि उपस्थित हुने भनिएको थियो । ओडीसी इन्टरनेसनले आयोजना गर्न लागेको थियो सो कार्यक्रम ।
‘डमरुको डण्डीबियो बैशाख २१मा
खगेन्द्र लामिछाने अभिनित सिनेमा ‘डमरुको डण्डीबियो’को रिलिज डेट कम्फर्म गरिएको छ । निर्माण पक्षले रिलिज डेटसहितको दुई नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ । अब सिनेमा बैशाख २१ गते प्रदर्शन हुनेछ । सिनेमाको पोस्टरमा खगेन्द्रलाई मात्र डण्डीबियो बोकिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा लोप हुँदै गैरहेको डण्डीबियोको कथालाई उठ्ठान गरेको सिनेमालाई स्क्रिप्ट राइटर छेतेन गुरुङले […]
प्रिमियर अब नेपालमा ‘ब्लाइन्ड रक्स’
मिलन चाम्स निर्देशित बायोपिक १८ गते देखि नेपालभर प्रदर्शन हुँदैछ । रिलिज अगाडि भीआइपी सो समेत आयोजना गरिएको छ । लन्डनका दुई दर्जन सहर प्रदर्शनपछि चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’ हङकङमा प्रिमियर गरिएको छ । निर्माता निकेश लिम्बु लन्डनबाट प्रिमियरमा सहभागि हुन हङकङ पुगेका थिए । ब्लाइन्ड रक्स“हेर्नेमध्ये धेरैका आँखा रसाए,” उनले भने, “ज्ञान र मनोरञ्जनले दर्शकलाई बाँध्यो […]
सदावहार सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्धर अभिनीत नयाँ फिल्म ‘हिरोज’ को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । अभिनेत्री पूर्णिमा लामाले निर्माण गरेको यो फिल्म चैत्र २३ गतेदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने पक्का भएको छ । एनबि महर्जन फिल्मका निर्देशक हुन् । बेरोजगारीको पीडा, महिला हिंसा, राजनीतिक विकृती, अन्याय बिरुद्धको आवाजका साथै प्रेमकथा प्रस्तुत गरिएको फिल्ममा करिश्मासँगै जयकिसन […]
अनमोलले लागाए अदिति संग माया जानी नजानी (भिडियो सहित)
काठमाडौं । आज चलचित्र ‘कृ’ ले प्रदर्शनको ४ दिन अघि नँया गीत सार्वजनिक गरेको छ। ‘जानी नजानी’ बोल रहेको उक्त गीतको छायांकन स्कटल्याण्डका मनोरम दृश्यहरुमा गरिएको छ।
एक किशोरीको कथा ‘पञ्चायत’
काठमाडौं । पञ्चायती व्यवस्थामा समाजमा हुने कानूनी न्यायलाई प्रमुख विषय बनाएर निर्माण गरिएको फिल्म ‘पञ्चायत’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । २०३३ सालको कथालाई उठान गरिएको फिल्मको ट्रेलरमा नायिका नीता ढुंगानाले पाएका दुःखलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
ट्रेलर सार्वजनिक ‘नाका’को (भिडियो)
काठमाडौं,। आउँदो फागुन १७ गते प्रदर्शन मिति तोकिएको चलचित्र ‘नाका’को शुक्रबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । ट्रेलरलाई हाईलाईट नेपालले सार्वजनिक गरेको हो ।पोर्ट प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको निर्देशन तथा कथा अमित श्रेष्ठको रहेको छ। प्रविण कार्कीको निर्माण तथा अमित श्रेष्ठको कथा र निर्देशन रहेको सो चलचित्रमा बिपिन कार्की, थिन्ले ल्हामो, रोबिन तामाङ, शिव मुखिया, […]
सहिनले राखे आफ्नै भाउजुसँग अनैतिक सम्बन्ध चर्चित वेबसिरिज ‘रङ टाईम’को कलाकार ( भिडियो )
सत्य घटनामा आधारित गीत ‘लाएको माया’ सार्वजनिक भयो । गीतमा एउटा समाजको यथार्थ चित्रण गरिएको गीतको भिडियो हेर्दा एकदमै मन छुने किसिमको छ ।दाजुभाई र भाउजुको कहानीलाई देखाईएको छ । एक्सल इन्टरटेनमेन्ट युकेको प्रस्तुतीमा रहेको गीतमा चर्चित वेबसिरिज ‘रङ टाईम’बाट चर्चामा आएका कलाकार सहिन प्रजापतिको आफ्नै भाउजुसँग अनैतिक सम्बन्ध बाहिरीएको देख्न सकिन्छ । एक्सल इन्टरटेनमेन्ट […]
अभिभावक अनिवार्य सुनिलको शेरबहादुर हेर्न
काठ​माडौँ । अबो आउँदो शुक्र​वार​ रिलिज​ हुन​ लागेको फिल्म​ ‘शेर​ब​हादुर​’को फिल्म सेन्सर बोर्डबाट आइतबार ‘पीजि’ सर्टिफिकेट पाएको छ । यो सर्टिफिकेट पाएपछि बालबालिकाले फिल्म हेर्न अभिभावकसँग फिल्म हल जानुपर्नेछ ।
क–कसलाई भयो टाउको दुखाई ,नेतृ बनिन् केकी
केकी अधिकारी अभिनित सामाजिक चलचित्र ‘गाउँकी छोरी’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक सामाजिक चलचित्रमा केकी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेकी छिन् ।
बन्दै गरुड पुराणा चलचित्र
गरुड पुराणाले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि चलचित्र घोषणा गरिएको छ । एस चलचित्र को मुख्य पात्रहरु कर्मा,प्रविन खतिवडा, कामेश्वर चौरसिया,नाजिर हुसेन,प्रियंका सिंह ठाकुरि ,लुनिभातुलाधर ,प्रकाश घिमिरे, बसन्त भट्ट आदि रहेको छ ।
यस्तो छ श्वेता र दयाहाङको ‘कान्छी’ को ट्रेलर (भिडियो)
कान्छी’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । मंगलबार प्रेसमिट गर्दै श्वेताले फिल्मको प्रोमो सार्वजनि गरेकी हुन् ।श्वेता र अभिनेता दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका रहेको अजब ।
रोजको जुहारी र कोहलपुर एक्सप्रेसमा काउ
केकी अधिकारि को डेब्यु निर्माण गरेको कोहलपुर एक्स्प्रेसको ‘सि ओ डब्लु काउ’ नामको गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘सि ओ डब्लु काउ’नाम दिएको गीत मा रिमा विश्वकर्मा, गम्भीर विष्ट, विनोद न्यौपाने र केकी अधिकारी रहैको छ ।
फेरी फेरी चलचित्र 8K प्रबिधि बाट खिचिदै
माघ ०९/ काठमाडौँ । चलचित्र फेरी फेरी को आज शुभमुहुर्त गरिएको छ । माता बसुन्धारा मुभिजको ब्यानरमा बनाउन लागिएको उक्त चलचित्र मा लेखन तथा निर्देसन रहेको छ पुरण थापा को । हास्यप्रधान उक्त चलचित्र मा निरज थापाको निर्माण रहेको छ भने सुरेश बज्राचार्यको छायांकन रहेको छ । चलचित्रलाई एन बि महर्जनले द्वन्द निर्देसन गरेका छन् र संगीत […]
शेरबहादुर नयाँ फष्र्टलुकमा यस्तो
काठमाडौं । अवकाश प्राप्त एक आर्मीको कथामा निर्माण भएको फिल्म ‘शेर बहादुर’को पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । निडर, शन्की र बलियो पात्र शेरबहादुर फिल्मको मूख्य पात्र हो । शेरबहादुरको चरित्र सहित अन्य कलाकार समावेश पोष्टर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
काठमाडौं । आगामी फागुन २५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘हुर्रे’को दोस्रो गीत ‘पशुपति’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा फिल्म युनिट र पत्रकारमाझ गीत सार्वजनिक गरियो ।
बाहिरियो सिनेमा ‘ईन्टु मिन्टु लण्डनमा’ को लुक्स रोमान्टिक मुडमा साम्राज्ञि र धिरज
नृत्य निर्देशन गरेर ख्याती बटुलेकी नृत्य निर्देशक रेनेशा बान्तावाको निर्देशकिय डेब्यु चलचित्र ‘ईन्टु मिन्टु लण्डनमा’ को फस्ट लुक पोस्टर सार्बजनिक गरिएको छ । निर्देशक बान्तावाले सामाजिक संजाल फेसबुकबाट उक्त पोस्टर सार्बजनिक गरेकी हुन् ।
सुश्री सम्पती बन्ने भयो सारा र सलोनको !
विगतमा अर्धकट्टी नामक चलचित्र निर्देशन गरेका संचारकर्मी सुर्वत आचार्यले सुश्री सम्पती नामक चलचित्र निर्देशन गर्ने भएका छन् । रमेश त्वयनाले निर्माण गर्ने यो चलचित्रमा अभिनेता सलोन बस्नेत र अभिनेत्री सारा श्रीपाली अनुबन्धीत भैसकेको बताईएको छ ।
विश्वकै कान्छा निर्देशकको ” हैरान”को डबिङ सकियो पोष्टर चांडै सार्वजनिक गरिने
विश्कै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टको निर्देशनमा तयार भईरहेको चलचित्र ‘हैरान’ को डबिङ सकिएको छ । गायक तथा अभिनेता सत्यराज आचार्यको डबिङ गरेपछी निर्माण टीम अब अन्य प्राविधिक कार्यमा जुटेको छ ।
अब बन्दैछ पसले
‘यो चेतनामूलक चलचित्र हुनेछ’ उनले भने, ‘एउटा पसलेले ग्राहकलाई जातियता र वर्गसँग होइन, मूल्यसँग तुलना गर्छ । फिल्म पनि यस्तै समानताको सन्देश दिने हुनेछ ।’यसअघि
मोफसलमा प्रेमगीत २ प्रिमियर
११ साउन २०७४, काठमाडौँ – फिल्म ‘प्रेमगीत २’को प्रिमियर सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शनमा आउनुअघि फिल्मको प्रदर्शन पोखरा र बुटवलमा भएको हो। नेपाली फिल्म बजारको लागि पोखरा दोस्रो ठूलो र बुटवल चौथो ठूलो बजार हो। सामाजिक कार्यमा सक्रिय फेसबुक समूह मेन्स रुम रिलोडेड (एमआरआर)ले प्रिमियर आयोजनाका लागि पहल गरेको हो। समूहले प्रदर्शनीका लागि च्यारिटी गर्दै […]
कलाकार डिना वाङ्देलको अमेरिकामा निधन
११ साउन २०७४, काठमाडौँ –वरिष्ठ कलाकार डिना वाङ्देलको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जिनियामा निधन भएको छ। मेनिन्जाइटिस कारण ५५ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको वाङ्देलका नेपालस्थित आफन्त प्रज्ज्वल शाक्यले जानकारी दिए। डिना भर्जेनिया कमन वेल्थ युनिभर्सिटीमा सह–प्राध्यापक थिइन्। कलाको इतिहास विषयमा करिब दुई दशकदेखि अध्यापन गराउँदै थिइन्। आधुनिक कलाका प्रणेता लैनसिंह वाङ्देलकी छोरी वाङ्देल सोही […]
चर्चित उपन्यास समर लभ माथि सिनेमा मा पनि !
सोभिन भटराई को चर्चित उपन्यास समर लभ माथि चलचित्र पनि बन्नी भएको छ !
राजा दीपेन्द्र को नया नेपाली फ्लिम !
नेपाली फ्लिम बजार मा राजा दीपेन्द्र को नाम मा नया फ्लिम बन्नी भयको छ !
सायद २ को दोस्रो ट्रेलर सार्वजनिक
नेपाली फिल्म ‘सायद २’ ले दोस्रो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार हाइलाइट्स नेपालको औपचारिक च्यानलमार्फत ‘सायद २’ को दोस्रो ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको थियो।
रेखा थापा काठमाण्डौबाट चुनाव लड्ने, उपमेयरमा उठाउने राप्रपाको निर्णय
रेखा अभिनित फिल्म डायरी यही जेष्ठ ५ गते प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको छ तर चलचित्र मात्रै नभएर उनि नेता बन्ने तयारिमा पनि लागेकि छिन।
‘सायद २’को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘सायद २’को ट्रेलर रिलिज सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ बर्षको अवसर पारेर कार्यक्रममा चलचित्रको ट्रेलर दर्शकमाझ सार्वजनिक गरिएको हो ।
बैशाख २२ गते रिलिज हुदैछ भुवनको ब्ल्याक डायरी
क्याटभिजन प्रोडक्सन प्रा।लि।को व्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ब्ल्याक डायरी यहि बैशाख २२ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । फिल्मले पछिल्लो समय बनेका भन्दा फरक खाले विषय बोकेको निर्माण टिमको दाबी छ ।
प्रियंका बनिन चमेली ,हेर्नुहोस हट नृत्य (भिडियो)
एमसन पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण गरिएको,जेठ २६ गते रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘लालटिन’को ‘चमेली’ बोलको भिडियो गीत सार्वजनिक भएको छ । आस्था राउतको स्वर तथा किरण माईकलको शब्द संगीत रहेको आइटम नम्बरमा नायिका प्रियंका कार्कीको नृत्य छ ।
दिपक दिपाको प्रस्ताबलाइ अस्विकार गरिन साम्राज्ञीले
बर्ष २०७३ को सर्वाधिक कलेक्सनको रेकर्ड राखेको फिल्म छक्का पञ्जांको सिक्वेलको रुपमा छक्का पञ्जा फेरीं बन्ने कुरा केहि दिन पहिले नै निर्माता दिपकराज गिरी अनि निर्देशक दीपाश्री निरौलाले पुष्टी गरेका छन ।
सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकि मनिषा कोइराला आमा बन्दै छिन
क्यान्सर जस्तो रोगलाई जितेर पुनर्जीवन पाएकी नेपाली तथा वलिउड अभिनेत्री मनिषा कोईराला,निको भएको पाँच बर्षपछि अब आमा बन्ने भएकी छिन ।
सम्राट दाहालसँग बिबाह गरेको केहि समयपछि सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकि मनिषा आमा बन्न कसरि सम्भब छत​?
निसाफमा गर्न लगे अनुपले हिसाब
सुपरियल फिल्मस्को ब्यानरमा बन्न लागेको, चलचित्र ‘निसाफ’को छायांकन सुरु भएको छ ।अपराधिक कथामा बन्न लागेको यस चलचित्रको निर्माता यस जंग राना हुन ।चलचित्रमा लेखन तथा निर्देशन विवेक सापकोटाको रहनेछ।
फेरि अर्को चलचित्र बनाउने रेखाको घोषणा
पछिल्लो समय राजनीतिक सक्रियता बढाएर चर्चामा रहेकी नायिका रेखा थापाले आफ्नो होम प्रोडक्सनबाट फिल्म ‘रुद्र प्रिया’ निर्माण गर्ने घोषणा सँगै मुख्य भूमिकामा खेल्ने बताएकी छिन्।
निखिलको“किङ्ग”ले मच्चायो गोपिकृमा तहल्का
निखिल उप्रेतीको अभिनय रहेको चलचित्र “किङ्ग”ले शनिबार दर्शकको राम्रो साथ पाएको छ ।बिहीवारबाट प्रदर्शन भएको “किङ्ग”ले शुक्रवारको दिनमा पनि तेती राम्रो व्यापार गरेको थिएन तर शनिबार भने चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको छ।
‘छक्का पञ्जा’ पाइरेसीमा संलग्न कृष्ण सुवेदीले गरे आत्महत्या
अहिलेसम्मकै नेपालि चलचित्रको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कमाइ गरेको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’को पाइरेसीमा सम्लग्न भनिएका युवा कृष्ण सुवेदीले आत्महत्या गरेको खुल्न आएको छ​।
पिजी प्रमाणपत्र पायो लाल्टिनले
एमसन पिक्चर्सको ब्यानरमा बनेको यस सिनेमालाई अनिम श्रेष्ठ र राज केसीले निर्माण गरेका हुन भने मनोज राजभण्डारी र दीपक श्रेष्ठ सहायक निर्माताका
हमाल महिला बन्नुको कारण के थियो?
चलचित्र सकुन्तला यतिबेला निकै चर्चामा छ , चर्चा यसर्थ पनि बढि छ कि महानायक राजेश हमाल आज सम्म नदेखिएको भुमिकामा छन् ।
बिपि कोइरालाको प्रख्यात कृतिमा बनेको चलचित्र​ तिन घुम्तिको ट्रेलर सार्वजनिक
बाबुराम ढकालले निर्देशन गरेको,बिपि कोइरालाको प्रख्यात कृति तिन घुम्तिको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ​।उक्त चलचित्र असार १७ बाट रिलिज हुदै छ भने
चलचित्र ज्ञाङ्गस्टारंमा अनमोलको ठाउँमा आशिरमानलाइ खेलाइने
अनमोल केसी खेल्ने भनिएको चलचित्रमा ​आशिरमान देशराज श्रेष्ठलाइ युवा स्टार अनमोल केसीको स्थानमा राख्दै चलचित्र ज्ञाङ्गस्टारं बन्ने भएको छ​।
सायद २ को शुभसाइत गरियो
सुनिल रावलको निर्माण एव पुष्पराज न्यौपानेले निर्देशन गरेको दुर्गेस फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र सायद २
आमा बनिन नायिका झरना थापा
गत शनिबार नायिका झरना बज्रचार्य आमा बनेकी छिन । सोहि दिन उनले तीन किलो तौल भएको छोरालाई आफ्नो सन्तानको रुपमा जन्म दिएकि छिन। ।
धमाधम जन्मिदै छन एक्सन हिरोहरु
चक्लेटि लुक्स भएका नवनायक आर्यन अधिकारी यस चलचित्रबाट एक्सन हिरो्को रुपमा जन्मिएका छन।
६० चलचित्रकर्मीलाई थाईल्याण्ड जाने अवशर
अवार्डमा कुल १६० जना चलचित्रकर्मी सहभागी हुने आयोजकले जानकारी गराए पनि केहि चलचित्रकर्मीले बैक स्टेटमेन्ट नदिएकाले
२०७३ साल दशैमा रिलिज हुदैछ​ छबि ओझाको किस्मत- २
निर्माता छबिराज ओझाले निर्मान गरेको चलचित्र किस्मत- २,२०७३ साल दशैमा रिलिज गरिने भएको छ।
‘बाटो मुनीको फूल २’ हेर्नेलाई स्कुटी उपहार
काठमाडौं, केही वर्ष अगाडि प्रदर्शन भइसकेको सिनेमा ‘बाटो मुनिको फूल’को राम्रै सफलता पछि दोस्रो सिक्वेलमा ‘बाटो मुनिको फूल २’ बन्ने भएको छ ।
हङकङमा राजेशपायलको २३औं प्रस्तुति
गीत–संगीत प्रस्तुतिका लागि देशभन्दा बढि विदेशमा रहने गायक राजेशपायल राईले हङकङमै मात्र २३औं पटक आफ्ना गीत पस्किएका छन्।
चलचित्र जंगेको आज ट्रेलर सार्बजनिक भयको छ
नेपाली चलचित्र जंगेको आज ट्रेलर सार्बजनिक भयको छ । सुशान प्रजापति निर्माता रहेको उक्त चलचित्रलाई
श्रीमानको साथ नभयएनी फरक नपर्ने यी सेलिब्रेटीहरु
श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेकाहरु आफुलाई ‘सिंगल’ भन्न चाहन्छन् । केही सिंगल नायिका यस्ता पनि भेटिए । सिंगल हुँदा पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव घटाएनन् । नेपाली समाजमा पनि विवाहपछिको सम्बन्ध बिच्छेद सामान्य हुन थालेको छ ।
होलीमा चर्चित कलाकारको साथमा होलि फेस्टा हुने
काठमाडौं/राजधानीमा चैत्र ९ गते फागुको अवसरमा डे आउट ट्राभल्स एण्ड टुर प्रालिको आयोजनामा होली फेस्ट २०७२ म्युजिक कन्सर्ट हुने भएको छ
पल शाहले वर्षा र आँचलसँग रोमान्स गर्ने
काठमाडौं । नाइ न भन्नु ल को ३ वटै सिक्वेल सफल भएको भन्दै निर्देशक विकास आचार्यले नाई नभन्नु ल ४ को घोषणा गरेका छन् ।
‘ड्रिम्स’ले ६ करोड कमाएको दाबी,
नायक भूवन केसीले निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्र ‘ड्रिम्स’ले ६ करोडको व्यापार गरेको दाबी
राजधानीमा कलाकर्मी र पत्रकार सम्मानित
रेस्पोन्सिभ मिडियाले पत्रकार र कलाकर्मीलाई सम्मान गरेको छ ।
सुरज सिंहले सैनिकको फूली लगाउने
काठमाडौं । निर्देशक एवं अभिनेताको रुपमा चिनिन्छन् सुरज सिंह ठकुरी । तर, उनको पहिलो रुची अभिनय थिएन ।
चलचित्र राहदानीको गीत बिमोचन
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र राहदानीको गीत बिमोचन गरिएको छ । बागबजारस्थित सिटी म्याक्स सिनेमामा सो गीत बिमोचन गरिएको हो ।
नयाँ वर्षमा लिटिल आइकन नेपाल
एनपी मिडिया हाउसले आफ्नो चौथो प्रस्तुतिस्वरूप बालबालिको प्रतिभामूलक स्पर्धा लिटिल आइकन नेपाल २०१६ आयोजना गर्ने भएको छ।
सम्पदाको प्रेमलाई विमलेशले यसरी टुक्राए
गायिका माण्डवी त्रिपाठीको स्वरमा समावेश ‘तिम्रो हेराई भित्र’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका रेखा थापा ‘प्रधानमन्त्री कपड इन्डो नेपाल महिला भलिबलको
चलचित्र ड्रिम्सका निर्माता/निर्देशक भुवन केसीले लाखौँ घोटाला गरेको आरोप (भिडियो)
चलचित्र छायांकनका क्रममा विभिन्न शिर्षकमा निर्माता रवि बस्नेतले चलचित्र ड्रिम गल उर्फ ड्रिम्सका नाममा
अनमोललाई अभिनय सुधार्न डीसीको सुझाव,
३ वटा चलचित्र खेलिसकेका ह्यान्डसम नायक हुन् अनमोल केसी । अनमोल केसीको क्रेज नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दिनहुँ बढिरहेको छ ।
चैत्र १२ मा रिलिज हुने ‘राहदानी’को आइटम गित सार्वजनिक (भिडियो)
फिल्म पत्रकार डब्बु क्षेत्रीको निर्देशन रहेको फिल्म राहदानीको आईटम गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्युठान क्षेत्र नं. २ को कांग्रेस सभापतिमा रोज राणा विजयी
नेपाली कांग्रेसको हाल चलिरहेको क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्युठान क्षेत्र नं. २ बाट फिल्म निर्माता तथा अभिनेता रोज राणा विजयी भएका छन् । १५१ मत ल्याउँदै उनले प्रतिद्वन्दी ध्रुब गौतमलाई ६७ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् ।
विवाह बन्धनमा बाँधिए ‘भष्मे’
हाल रिलिज भइरहेको फिल्म ‘पशुपति प्रसाद’ मा ‘भष्मे’ को भूमिकाले चर्चा पाइरहेका अभिनेता तथा रंगकर्मी विपिन कार्की विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
बलिउड अभिनेता शक्ति कपुर काठमाडौंमा
बलिउडका चर्चित अभिनेता शक्ति कपुर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
ऋचाले खोलेकी कि खुलेकी ?
पर्दामा सोझी महिलाको भूमिकामा देखिएकी ऋचाको बाहिरी रुप भिन्न देखाएको छ
एकैसाथ चार नेपाली चलचित्र
शुक्रबार कलिउड (नेपाली चलचित्र उद्योग) मा चार चलचित्र एकै साथ ‘रिलिज’ हुँदैछन् ।
अबदेखि युएईमा नेपाली फिल्म छायांकन गर्न पाइने
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा अबदेखि नेपाली फिल्म वैधानिक रुपमै छायांकन गर्न पाइने भएको छ ।
रहेनन् वसन्तजंग रायमाझी
वरिष्ठ नेपाली फिल्म निर्देशक वसन्तजंग रायमाझीको बुधबार बिहान ८१ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
उहाँको उपचारका क्रममा थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो ।
नुवाकोटमा ९ देशका कलाकार आउँदै
भरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपको मुख्य आयोजनामा हुने उक्त मेला नुवाकोटमा भने नाट्यश्वर कला केन्द्र तथा ईभेंट म्यानेजमेन्टले गर्ने भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराईएको छ ।
‘पशुपति प्रसाद’ अष्ट्रेलियामा
आउँदो शुक्रबार रिलिज हुन लागेको दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्म अस्ट्रेलियामा पनि सोहि मितिमा रिलिज हुने भएको छ।
आवाजबाट बिजुली !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि ‘हावाबाट बिजुली’ भाषणले व्यापक चर्चा पायो । ‘देशको यस्तो परिस्थितिमा गर्न नसकिने मात्र भाषण गर्प्रधानमन्त्री’ को आरोप खेपिरहेका केपी ओलीलाई नै चुनौति दिनेखाले फिल्म निर्माण भएको छ, ‘बिजुली मेशिन’ ।
करिश्मा पनि ‘नयाँ शक्ति’ मा
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको केन्द्रीय परिषदमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर पनि छिन्।
‘नार्इं नभन्नू ल ४’को ‘चियाकफी’
‘नाईं नभन्नु ल’ श्रृंखलाको चौंथो फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ४’को ‘चियाकफी’ बोलको गीत र भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
चलचित्र “म त तिम्रै हुँ” टिमले सुष्मिता बम्जनलाई सरप्राइज केक (फोटो फिचर सहित)
नायिका तथा निर्मात्री सुश्मिता बम्जनलाई पोष्टप्रोडक्सन को क्रममा रहेको फिल्म “म त तिम्रै हुँ” को निर्माण युनिटले जन्मदिनमा सरप्राइज केक दिएको छ ।
करिस्मा र ऋचाको लडाई
फागुन ७ मा सदाबहार अभिनेत्रीको उपमा पाएकी करिश्मा मानन्धरको फिल्म ‘फागु’ रिलिज हुँदैछ ।
गुरुङ चलचित्र अवार्ड
गुरुङ चलचित्र र त्यससँग सम्बद्ध कलाकारको सम्मान, प्रोत्साहन र मुल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले पोखरामा ‘गुरुङ चलचित्र अवार्ड’ हुने भएको छ । पोखरामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘चलचित्र अवार्ड’ आयोजक जक्सन डटकमले आगामी फागुन १४ र १५ गते अवार्ड गर्ने जानकारी दिएको हो ।
गरीमाले सुटुक्क बिबाह गरेको कारण निर्देशक बाबुराम तनावमा
नायीका गरीमा पन्तले बेल्जीयममा बस्ने एन आर एन संग बिबाह गरेकि छिन् । सोझि नायीका भनेर चिनिने पन्तले
चैत्रमा आर्यनको ‘आवेग’
चलचित्र आवेगले आर्यनको लभरव्वाइको इमेजलाइ एक्सन हिरोको रुपमा परिणत गराउने निर्देशक निरौला बताउछन् ।
झरना पनि आमा बन्दै
भारतीय मुलका मलेसियन नागरिकसँग बिहे गरेकी मोडल तथा नायिका झरना बज्रचार्य पनि आमा बन्ने हुनुभएको छ ।
बागमती- २ बन्ने
चलचित्र ‘बागमती’को प्रदर्शन मिति नजिक आउदै गर्दा चलचित्र युनिटले ‘बागमती -२ ‘निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
6,26,316ले हेरे ‘ड्रिम्स’को ट्रेलर
अनमोलको फ्यानका कारण पनि युटुबमा भिजिटर बढेको हो । छोटो समयमा नै ट्रेलरमा देखिएको क्रेजका कारण फिल्मलाई निकै प्रतिक्षित शैलीमा हेरिएको छ
बक्सअफिसमा दुई स्टार
यस साता दुई नेपाली फिल्म रिलिज भए– ‘फन्को’ र ‘काफल पाक्यो’ । यी दुवै फिल्ममा केही समानता पनि छन् । जस्तै, दुवै फिल्मको प्लट सडकमै बुनिन्छ र सडकमै सकिन्छ ।
रेखाका नयाँ हिरो आभास गीतमा यस्तो देखिए
चैत २६ गते प्रदर्शन हुने रेखा थापाको फिल्म ’रामप्यारी’बाट रेखाले नयाँ हिरोलाई डेब्यू गराउनुभएको छ ।
सिम्पलले बिहे गरिन्
बेलायतमा रहँदै आएका नदिन र सिम्पलको प्रेम केही समयदेखि चलेको बताइन्छ।
यसपछि उनीहरुले बिहे गर्ने सोच बनाएका थिए ।
जु¥यो क्यारे लगन !
बेल्जियम निवासी व्यवसायी प्रेमीसँग गरिमा पन्तले सुटुक्क बिहे गर्नुभएको छ ।
गरिमा दुईवर्ष अघि देखि बेल्जियममा व्यापार गर्दै आएका एनआरएन हरि शर्मा थपलियासँग प्रेममा पर्नुभएको बताईएको थियो ।
क-कस्को डेब्यू माघ २९ मा ?
माघ २९ मा भिड्दै गरेका ‘प्रेमगीत’, ‘क्लासिक’ र ‘चलेछ बतास सुस्तरी’लाई लिएर निर्माता निर्देशकदेखि कलाकारहरु अहिले प्रचारमा ब्यस्त छन् । पहिलो हुने तथा दर्शक आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा उल्लेखित फिल्मसँग सम्बद्ध सबै लागिपरेको पाईन्छ ।
‘फन्को’को बिहानी बिजनेश (बक्सअफिस)
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘फन्को’ले बिहानी शो मा दर्शकको राम्रो साथ पाएको छ । राजधानी तथा मोफसलका हलहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार फिल्मको बिहानी शो को अकुपेन्सी ७० प्रतिशत माथि छ । सिङ्गल स्कृनमा दर्शकले ताली र हुटिङ दिएका छन् ।
राजेश र भूवन बोलेनन्
नायक भूवन केसीले घुमाउरो शैलीमा राजेश हमाललाई दिइएको ‘महानायक’को उपाधीमाथि
धकेलियो कामना अवार्ड
२०७२ मै आयोजना हुनुपर्ने दोस्रो संस्करणको ‘सिजी कामना अवार्ड’ एक वर्ष पर सरेको छ ।
सुरज सिंह ठकुरी‘जंगे बने
कान्तिपुर टेलिभिजनको चर्चित शो ‘कल कान्तिपुर’ बाट चर्चित बनेका संचारकर्मी सुरज सिंह ठकुरी पनि चलचित्रमा छाउन थालेका छन् । भिजे बाट फिल्ममा जम्प गरेका सुरज अहिले भने ‘जंगे’ बनेका छन्
आयो ‘ड्रिम्स’को ट्रेलर
अनमोल केसी पछिल्लो समयका सबभन्दा बढी फ्यान भएका नयाँ हिरो मानिएका छन् । ‘होस्टेल’ र ‘जेरी’ पछि उनको नयाँ फिल्म ‘ड्रिम्स’ ले सोमबार प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । र, यो फिल्मलाई उनको स्टारडमको परीक्षा मानिएको छ ।
अभिनेत्री केकी अधिकारको बाग्मती फिल्ममा रकस्टारको भुमिका छ भनेर प्रचार प्रसार गरिएको थियो ।
‘डिसहोम’मा प्रत्येक हप्ता नेपाली फिल्म
डिसहोम’ जडान भएका टेलिभिजनमा अब प्रत्येक हप्ता पुराना नेपाली फिल्महरु हेर्न पाइने भएको छ ।
सिम्पल खनालले गरिन् इन्गेजमेन्ट
चर्चित मोडल सिम्पल खनालको इन्गेजमेन्ट भएको छ । निर्देशक प्रसन्न पौडेलसंग डिभोर्स गरी बसेकी उनले युकेमा
शिव र हमाल, बाग्मतीमा दमदार
अभिनेता राजेश हमाल र शिव श्रेष्ठले बर्षौपछि सँगै काम गरेको फिल्म हो, ‘बागमती’ ।
राजेश कि सकुन्तला ?
कालो सारी, गलामा कालै माला, हातभरी चुरा, निधारमा रातो टिका । नेपाली नारीको पहिरनमा देखिए, महानायक राजेश हमाल ।
पशुपतिप्रसादको गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘पशुपति प्रसाद’को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । फिल्मका निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले चलचित्रको मर्म बोकेको यो गीतले पनि धेरैको मन छुने आशा ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
चकलेटमा सरकारको चासो
चकलेट फिल्ममा सरकारले चासो देखाएको छ ।
निर्मल शर्मा निर्देशित फिल्म चकलेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगातले चासो ब्यक्त गर्नुभएको हो ।
पुषमा फुस नेपाली फिल्म नगरी
पुष महिना फिल्मकर्मीहरुका लागि त्यति उत्साहजनक देखिएको छैन । अहिले सम्म लागेका फिल्मले राम्रो ब्यापार नगरेपछि फिल्म नगरीमा यो महिना घाटा लाग्ने भएको छ ।
चलचित्र क्लासिकको ट्रेलर सार्वजनिक (ट्रेलर सहित)
काठमाडौं /चलचित्र ‘क्लासिक’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यस चलचित्रमा आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ ।
बाहिरियो चलचित्र ड्रिम्सको फस्ट लुक्स
काठमाडौं / छोटो समयमा नै लोकप्रिय भएका नायक अनमोल केसीले अभिनय गरेको चलचित्रको अभिनय ‘ड्रिम्स’को फस्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ । क्रिसमस डेको अवसर पारेर अभिनेता भुवन केसीको डेब्यु निर्देशन रहेको चलचित्र ‘ड्रिम्स’को फस्ट लुक सार्वजनिक गरिएको हो ।
चलचित्र बागमतिको प्रचार तिब्र
काठमाडौं/चलचित्र ‘बागमती’ले प्रदर्शन मिति नजिक आउदै गर्दा चलचित्र प्रचार प्रसारको लागि कुनै कमि गरेको छैन । गत शनिबार मात्रै महानायक राजेश हमालले साइकल र्याली कार्यक्रममा साइकल चलाएर चलचित्रको प्रचार प्रसार गरेका थिए ।बिहिबार राजधानीमा क्रिसमसको अबसरमा गरिएको फेसन शोमा चलचित्र ‘बागमती’को सहभागिता रहेको थियो । हाम्रो टेलिभिजन च्यानलले बिहिबार साँझ फेसन शोको आयोजना गरेको […]
चलचित्र प्रेम गितको जब पुग्छु रिभर साइड गीत रिलिज (भिडियो सहित )
काठमाडौं/भ्यालेनटाइन्स डेको अवसर परेर प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘प्रेम गीत’ को नयाँ गीत ‘जब पुग्छु रिभर साइड’ बोलको रिलिज भएको छ । यस गीतमा नायिका पूजा शर्मा र दर्जन बढी कोरसलाई कम्मर मर्काउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । सुबानी मोक्तान स्वर तथा अर्जुन पोखरलले शब्द तथा संगीत रहेको यस गीतको कोरियोग्राफी चाँहि रेनाशा राईले गरेकी हुन […]
चलचित्र जाउ हिड पोखराको ‘संगसंगै हिडेको’ गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं/फिल्म ‘जाऊ हिड पोखरा’को निकै मन छुने नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । अडियोमा निकै रुचाइएको ‘संगसंगै हिडेको’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा फिल्मको मुख्य कलाकारद्धय जीवन लुईटेल र रेखा थापा फिचरिङ छन । उनीहरुको प्रेम, रोमान्स र संघर्षका दृश्यहरु गीतमा देखिन्छ । मंसिर ११ गतेदेखी प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्मको अहिले प्रचारप्रसारलाई तिब्रता […]
चलचित्र आधा पेजको फस्ट लुक सार्वजनिक
काठमाडौं/पुष १० गते बाट प्रदर्शन आउन लागेको चलचित्र “आधा पेज”को फस्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । तिहारको अवसर परेर चलचित्रको सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रको मुख्य कलाकार सलोन बस्नेत ,रिस्ता बस्नेत ,रुपेश न्यौपानेलाई देख्न सकिन्छ ।चलचित्र “आधा पेज”समुन्द्र भट्टको निर्देशनमा तयार पारिएको हो ।चलचित्रमा सलोन,रिस्ता,रुपेशको अलावा बिपना बस्नेत , दीपक क्षेत्री ,सुरज आरडी,सन्तोष ढकाल,सारिका न्यौपाने, अशिम […]
चलचित्र चकलेटको ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं /नायिका पुजना प्रधानले निर्माण गरेको चलचित्र चकलेट को नया ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रमाा पूजना प्रधान, आयुष्मान घिमिरे, सुमन गैरे, नम्रता झा लगायतको अभिनय रहेको छ । चलचित्रलाई निर्मल शर्माले निर्देशन गरेका हुन् भने चलचित्रमा पूजना प्रधान, खुशी गुरुङ, प्रितीमाया गुरुङ, केशव तामाङको लगानी रहेको छ । चलचित्रले सडक बालबालिकाको कथालाई उठान […]
बन्ने भयो इन्काउन्टर अफिसर
काठमाडौं/ चलचित्र इन्काउण्टर अफिसर बन्ने भएको छ । शनिबार शुभसाइत गरिएको ‘इन्काउन्टर अफिसर’ नामक चलचित्रमा निखिलको एक्सन देखिनेछ । प्रहरी निरिक्षक धर्मराज भण्डारीले क्ल्याप ठोकेर चलचित्रको शुभसाइत गरेका हुन् । चलचित्र सेवान्तिका फिल्मस् र एभरेष्ट फिल्मस्को संयुक्त ब्यानरमा बेदप्रसाद भुर्तेलले निर्देशन गर्दैछन भने लगानी दुई जना हर्क देउवा र प्रतिक श्रेष्ठ ले मिलेर गरेका […]
चलचित्र बागमतीको गीत सार्वजनिक
काठमाडौं/पुष २४ गते बाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘बागमती’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘सानु एक्लाई छौ’बोलको सार्वजनिक गीतमा बिश्व नेपालीको स्वर रहेको छ ।विजय सत्यलको शब्द रहेको छ । यस गीतमा नायिका केकी अधिकारी र गायक बिश्व नेपालीलाई फिचरिंग गरिएको छ । नेपाली बजेटमा बनेको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महंगो नेपाली फिल्म ‘बागमती ‘को […]
माउथ पब्लिसिटीले उकासिदैछ ‘सुश्री’को ब्यापार
काठमाण्डौ/हिन्दुहरुको महान पर्ब बिजया दशमीको मौका छोप्दै फुलपातिका दिन सार्बजनिक प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सुश्री’को ब्यापार दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दैछ । अन्य तीन बलिया फिल्म संग जुध्न पछि नपरेको ‘सुश्री’को कमजोर प्रचार र हल संख्या अत्यन्त न्युन हुदाहुदै पनि पछिल्लो समयमा भने माउथ पब्लिसिटीकै कारण ब्यापार बढ्न थालेको यसका निर्माता तथा बितरक बताउछन् । रिलिजको […]
‘चंखे शंखे पंखे’ अब विदेशमा पनि प्रर्दशन
काठमाडौं / सुदर्शन थापाद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘चंखे शंखे पंखे’ अब विदेशमा पनि प्रर्दशन हुने भएको छ । नेपालमा असोज ८ गते नै प्रदर्शनमा आएको थियो ।
पन्त फिल्मसले रक्तदान गर्ने
काठमाडौं/ पन्त फिल्मस्को २० औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ ।
चलचित्र ‘आधा पेज’ अब प्रदर्शनको लागि तयार
काठमाडौं/ चलचित्र प्रचार शैलीमा अहिले समाजिक सञ्जालको प्रयोग हुन थालेको छ । त्यसमा पनि विभिन्न तरिका अपनाउन थालिएको छ ।
निशा किलिमन्जारो हिमाल चढ्ने
काठमाडौ/ नायिका निशा अधिकारी फेरी हिमाल चढ्ने भएकी छन् । आइतबार कलाकार संघको गरेको कार्यक्रममा निशाले तान्जानियाको ……
रिमा बनिन् दुलहि
काठमाडौं/ नायिका रिमा विश्वकर्मा बिवाह बन्धनमा बाधिएकी छन् । आइतबार नायिका रिमाले प्रेमी रोवर्ट …..
बिबाह गर्दै रिमा
काठमाडौ । प्रदर्शोन्मुख चलचित्र ‘भाले फाईट’ नायक बाबु बोगटीसंग बिबाह गरेकी नायिका रिमा ….
चलचित्र सुश्रीको ‘टेम्पोररी माया’ गित सार्वजनिक
काठमाडौं/ चलचित्र सुश्रीको ‘टेम्पोररी माया’ गित सार्वजनिक भएको छ …..
वडा नम्बर ६ को दुई दिने कलेक्सन यस्तो : पुगेको छैन् करोड क्लवमा –
बजारमा वडा नम्बर ६ करोड क्लवमा प्रवेश गरेको खबर जसरी आईरहेका छन् सो खबर गलत रहेको भन्ने हाम्रो स्थलगत रिपोर्टले देखाएको छ । फिल्मले हिजो शनिबार ४३ लाखको छेकोमा ग्रस कलेक्सन गर्यो भने शुक्रवार २७ लाखको ओपनिङ गर्दै कूल ७० लाखको दुई दिने राउन्ड फिगर कलेक्सन गरेको छ । फिल्मले हिजो शनिबार गोपीकृष्ण मुभिजमा सवै […]
चंखे प्रिमियरमा देखिए लालबाबु र माधव नेपाल : प्रतिक्रिया आयो यस्तो
निकै चर्चामा रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डित र नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संगै बसेर चंखे शंखे पंखेको प्रिमियर सो हेरेका छन् । बुधवार साँझ कमलपोखरी स्थित वीग मुभिजमा आयोजित प्रिमियर सोमा उनीहरुले फिल्म मात्र हेरेनन् कलाकारहरुसंग सेल्फी फोटो समेत लिन भ्याएका थिए । विशेष गरी सेल्फी फोटो लिन माधव नेपालको […]